လက်ထပ်ထားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားသွေးဆောင်ဖြိုခွဲနည်း၊ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
စတိုင်လ်အမျိုးသားများ | | အချိန်အား
လက်ထပ်ထိမ်းမြားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဖြားယောင်းခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အချို့ရှိပါသည် တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ညစဉ်ညတိုင်းအိပ်ပျော်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားသင်မည်သို့ဖြားယောင်းမည်ကိုသင်သိလိုလျှင်သိသင့်သည့်လှည့်ကွက်များ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်သင်၏စိတ်ကူးသည်လက်စွပ်ဖြင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်ဤဆောင်းပါးတွင်သင်သိရှိရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုသိပြီးသိလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၊ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်မိတ်ဖက်ရှိပြီး၎င်းသည်ထိုအရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိရရန်အရေးကြီးသည် သူမကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ရန်သူမကသူမ၌ရှိသည့်အရာများထက်သူမအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုပေးရပါမည် သူအိမ်ပြန်လာတိုင်းညအိပ်ရာဝင်တိုင်းသူတွေ့သမျှအရာအားလုံး။
1.2 တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်, သတိဖြင့်ဆိုသော်ငြား
1.3 စိတ်ရှည်ပါ၊ မမြန်ပါနဲ့
2 အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကသင့်ကိုနှစ်သက်လားဘယ်လိုပြောရမလဲ
2.2 တပ်ကြပ် lenguage
4 ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်; ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားပါ၊
ဤဆောင်းပါး၏နိဒါန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားပြီးသောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားသွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည် များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့ရှိပြီးသားအရာများကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်တိုးတက်စေသည့်အရာတစ်ခုသို့ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရသည်။ သူတို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရည်ရှိသောလူကိုကြည့်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရယ်မောစေသည်။ သို့မဟုတ်သူတို့၏စကားကိုသာနားထောင်သည်။ နေ့စဉ်ဂရုမစိုက်ဘဲဂရုမစိုက်ပါကလက်ထပ်ခြင်းသည်အရာအားလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်ဟုလူသိများသည်။
💡သင့်လိင်တံအရွယ်အစား အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်ခြင်းအတွက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသလား။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့အကြံပြုပါသည် ဤနေရာမှ Penis Master စာအုပ်ကိုကူးယူပါ အတွက်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန်အတွက် အန္တရာယ်ကင်းစွာသင်၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်.
ထောက်ခံချက် သင့်ကိုယ်သင်မတူကွဲပြားကြောင်းပြသရန်ကြိုးစားပါ၊။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားဖြားယောင်းသွေးဆောင်ရန်ကြိုးစားလျှင်၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများကသင်ဝယ်ယူခဲ့သည့်အရာနှင့်အတူ ၀ တ်ဆင်သည်ဆိုပါကသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး အနေနှင့်မည်မျှပင်နေပါစေသင်ဆိုးဝါးစွာစတင်ပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများသည်မတူညီသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေကြသည်။ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ခင်ပွန်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အရာမဟုတ်ပါ။
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သင်လက်ထပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားမှုရှိစေရန်သင်ကိုယ်တိုင်မရပ်တန့်ဘဲသင်ကိုယ်တိုင်ကွဲပြားစွာပြရမည်။ သင်မဟုတ်သူတစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းသည်သင့်ကိုရက်အနည်းငယ်အစေခံလိမ့်မည်။ သို့သော်ရေရှည်တွင်သင့်အတွက်မကောင်းသောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။ သူမခင်ပွန်းအားလုံးသည်သူနှင့်သူမကဲ့သို့အချိန်နှင့်အခါအားလျော်စွာထင်မြင်ချက်ကိုစွန့်ခွာသွားမည့်သူအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မည် သူကသူမကိုခဏတာတောင်ချစ်တယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည် သင်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားအမျိုးသမီး၏လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အားနည်းအချက်များ။ အခြေအနေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး (သို့) အမျိုးသားတစ် ဦး သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏အပြင်ဘက်တွင်ဆက်ဆံရေးရှိရန်ကြိုးပမ်းသည့်အခါတစ်စုံတစ်ရာသည်ဖြစ်ပျက်နေခြင်း (သို့) ကောင်းမွန်စွာသွားခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်အသစ်သောခံစားမှုအသစ်တွေကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာအရာအားလုံးဟာပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုရိုးရှင်းလိမ့်မယ်။ သင်ဟာစာဖတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးအဲဒါကိုသွားနိုင်တယ်လို့ပြောရဲတော့တာပေါ့။
သင်၏ကဒ်များကိုမည်သို့ကစားရမည်ကိုသိရန်ထိုအားနည်းချက်များကိုသင်သိထားရမည်။ အသေးအဖွဲကိစ္စတွေပျက်သွားတာဒါမှမဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းပျက်ကွက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ အဲဒါကမင်းကိုသိပ်ကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊
သင်၏အိမ်ထောင်ရေး၏အားနည်းချက်များကိုသိသောအခါသိမ်မွေ့နက်နဲသောပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။ သင်သည်သင်၏လက်ထပ်ခြင်းအပြင်ဘက်ရှိတစ်ခုခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါက၎င်းကိုသင်အလွန်မနှစ်သက်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပြောဆိုခြင်းကိုမကြိုက်ပါ။
သင်စိတ် ၀ င်စားသည့်အမျိုးသမီး၏အားနည်းချက်များကိုသင်သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ကိုယ်တိုင်မတူကွဲပြားကြောင်းပြပြီးအခြားပါတီသည်သင့်ကိုလက်ခံပြီးသင်ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းသေချာသည်နှင့်တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
ဒီအဆင့်မှာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့သတိထားဖို့လိုတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ထပ်ပြီးသောအမျိုးသမီးကိုသွေးဆောင်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုမမေ့သင့်ပါ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခု။
A ကောင်းဆုံးစိတ်ကူးဖြစ်နိုင်သည် ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါ၊။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူမကိုဘယ်မှာခေါ်သွားတာလဲသတိထားပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမမှာသူမမှာတွဲဖက်ရှိပြီးသူမမျှော်လင့်ထားသည့်အခိုက်အတန့်မှာသူမကိုဖမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။ တာဝန်ရှိလင်ယောက်ျားကသင့်ကိုသူ့ဇနီးနှင့်အတူညစာစားမည်ဆိုပါကသေခြင်းအတွက်သင့်ကိုယ်သင်စွန့်လွှတ်ပါ။ ထို့အပြင်အိမ်ထောင်သည်မိန်းမကအရာရာအားလုံးကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ သူမပိုင်ဆိုင်သည့်အရာများကိုမဆုံးရှုံးစေရန်သူသည်သင့်ကိုဘယ်တော့မျှဖုန်းဆက်မည်မဟုတ်၊
တိုက်ခိုက်မှုကိုဆက်လုပ်ခြင်းသည်မနက်ဖြန်သင်၏အသစ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်၏ခင်ပွန်းနှင့်ကွဲကွာသွားပြီးအရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာကာဘဝအသစ်တစ်ခုနှင့်ရှင်သန်ရန်သင်နှင့်အတူသွားရန်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဆက်ဆံရေးသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်။ ခိုင်မာမှုရှိသင့်သည် ကံမကောင်းတာကမင်းအတွက်သူမဟာဆက်နွယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုရှင်သန်ဖို့ပိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ဖို့သင်သိရမယ်။
ကံကောင်းတာက၊ သင်သူမကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းပြီးတာနဲ့သူမအနားမှာဆက်ရှိနေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသင့်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားဘာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းသတိထားရမယ်။ ပြီးတော့အဲဒီအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်စွန့်စားခန်းတစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူမနဲ့တခြားအရာတစ်ခုကိုလိုချင်ရင်လုံလုံလောက်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူမဟာသူမရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြတ်တောက်သွားစေမှာသေချာပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကသင့်ကိုနှစ်သက်လားဘယ်လိုပြောရမလဲ
သင်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပုံပန်းသဏ္elseာန်သည်အခြားအရာတစ်ခုခုလားဟုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ အမြဲတမ်းဒီအခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့ဘက်ကတကယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိ၊သို့မဟုတ်ပါကသိချင်စိတ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာ တချို့သော့ချက်အချက်များ သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်ကြောင်း:
မျက်လုံးချင်းဆုံမှုသည်အပြီးသတ်မဟုတ်ပါ ပထမဆုံး "ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း" တစ်ခုတည်ထောင်ရန်အလွန်သတိပညာရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခု။ အကယ်၍ သင်သူမကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားပါကသူသည်သင့်အားမကြာခဏ၊ အမြဲတစေနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုလိမ့်မည်။
အကယ်၍ မိန်းမတစ်ယောက်ကမင်းကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်၊ သူမထိုမျက်လုံးချင်းစခြင်းဖြင့်သူမဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူမ၏အကြည့်ဖြင့်သူ့ကိုယ်သူသယ်ဆောင်သွားပါစေ။
El တစ်ချက်လဲလှယ် အထောက်အထားဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူမသည်သင်၏အကြည့်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသူမ၏မျက်လုံးများကိုမရုပ်သိမ်းပါကအောင်မြင်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သူတို့အဝေးကိုကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်မှာဒီအပြုအမူရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုသင်စောင့်စားသင့်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားဖြင့်ထုတ်လွှတ်နိုင်သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအရိပ်လက္ခဏာ သငျသညျမိမိကြိုက်နှစ်သက်ဖြစ်ကြောင်း။ မင်းကိုသူမကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်သင်သူမကိုကြည့်နေစဉ်သူမ၏ဆံပင်ကိုထိုးရန်သူသည်ကာမဂုဏ်ခံစားမှုဖြင့်လမ်းလျှောက်နေသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သင်သူမနှစ်သက်သောသက်သေသာဓကမှာထင်ရှားလိမ့်မည် ခင်ဗျားနဲ့ပိုနီးစပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်သိမ်မွေ့, ဒါမှမဟုတ်ရှာကြံ တစ် ဦး စကားပြောဆိုမှုစတင်ရန်မဟာဗျူဟာမြောက်ရာထူး သငျသညျ။
သငျသညျသူမနှင့်စကားပြောရန်နှင့်စကားပြောဆိုမှု၏သင်တန်း, သူမကသင်ပြကြောင်းသတိပြုမိဖို့စီမံခန့်ခွဲလျှင် ပထမ ဦး ဆုံးမှာမသိနိုင်ကြောင်းသူမ၏တစ် ဦး အသွင်အပြင်၎င်းသည်သူသည်သင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးကသူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများထံပုံတစ်ပုံပေးသည်ကိုသင်သိရမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်းသည်အပြည့်စုံဆုံးပုံဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကသင့်ကိုနှစ်သက်သူဖြစ်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည် အနည်းငယ်သာတည်ရှိသည်ကိုသူ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့ကိုဖော်ပြပါ။
လက်ထပ်ပြီးသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမသက်သောင့်သက်သာရှိသည့်နေရာဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အပြင်နှစ်သိမ့်မှုခံစားရသောအခါသူသည်သင့်ကိုသူနှစ်သက်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ အခြားအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသင့်တွင်သူမသည်အခြားသူများအားသူမဖော်ပြလိုသည့်အရာတစ်ခုကိုသူမထွန်းလင်းနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် မင်းနဲ့အတူသူမအရမ်းသက်သောင့်သက်သာရှိတယ်။
၎င်းသည်ချက်ချင်းမဖြစ်နိူင်သော်လည်း (ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်) အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကသင့်ကိုနှစ်သက်လျှင်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ၎င်းသည် ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကိုယူသောသူသည်မိမိကိုယ်ကို.
ဤအခြေအနေမျိုးတွင်သင်မည်သို့တုံ့ပြန်သနည်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းကသူတို့ကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးရမယ်၊ ကန ဦး တင်းမာမှုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားအောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့မင်းကိုလည်းသူမစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြပါ။ သော့ချက်ကဒီပထမခြေလှမ်းကိုတတ်နိုင်သလောက်တတ်နိုင်သမျှတီထွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်မြင်သည်အတိုင်း, အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားကိုမည်သို့အနက်ဖွင့်ရမည်ကိုသိသည် သူကသင့်ကိုသူကြိုက်သည်မလားဆိုတာသိရန်နှင့်၎င်းမှလုံခြုံသောခြေလှမ်းများလှမ်းဖို့လိုအပ်သည်။ သင့်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသောအမျိုးသမီးများသို့မဟုတ်သင်၏စူးစမ်းလိုစိတ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းသည်သင့်အတွက်ကျန်းမာရေးမကောင်းပေ။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ သင်လက်ထပ်လျှင်ပိုပင်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကြီးမားသောလျှို့ဝှက်ချက်မှာသူမကိုစဉ်းစားရန် "အားပေး" ရန်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာသူမသည်သူမနှင့်အတူရှိနေလိုသူနှင့်အမှန်တကယ်ရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ သူမထင်မြင်ချက်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်၊ သူသည်သူနှင့်အတူရှိခြင်းထက်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဘာကြောင့်အချိန်ပိုပေးရတာလဲ။
ထိုအခါ ကျနော်တို့ထိရောက်သောစာပိုဒ်တိုများဥပမာအချို့ကိုကြည့်ပါ လက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အောင်နိုင်ဘို့:
မင်းကမင်းကိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားတဲ့တခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူလို့ငါသဘောကျတယ်။ သူတို့ကိုအမြဲ သူတို့ဟာထူးခြားတာကိုခံစားချင်ကြတယ်နှိုင်းယှဉ်ပြောရလျှင်အခြားအမျိုးသမီးများအထက်။
“ မင်းကတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူး။ မင်းမှာငါဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ငါ့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသောနားမလည်နိုင်လောက်အောင်တစ်ခုခု ငါ့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျစေသည်။ အထက်ပါကဲ့သို့တူညီသောလိုင်းများတလျှောက်။
“ ငါတို့နီးကပ်လာတဲ့အခါမင်းကငါနဲ့မင်းပဲငါတည်ရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးဆီကိုမင်းကိုငါချီးမြှောက်တယ်။ ” ဤစာပိုဒ်တိုများဖြင့်သင်ရောက်ရှိနေသောတိုက်ရိုက်အဆင့်သို့သွားပြီးဖြစ်သည် သင်အတူတကွရှိပြီးဖြစ်သောအခြေအနေကိုစီမံခြင်း တစ်နေရာရာမှာ
မင်းရဲ့အလှအပကြောင့်ငါလိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ဤစကားစုဖြင့်သင်သည် သင့်ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်သင်၏ predisposition ဖေါ်ပြခြင်း သူမနှင့်ပါဝင်ရန် ဒီအစွမ်းသတ္တိကိုပြတာကသူမအတွက်အရေးကြီးတယ်၊ သူတို့ရဲ့မသေချာမရေရာမှုနှင့်ကြောက်စိတ်ကြီးကြောင်းကိုမမေ့ပါနှင့်
“ မင်းအတွက်မင်းအတွက်စံနမူနာပြအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ မင်းကတကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်၊ ငါဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်ဝါကျ၏မျဉ်းကြောင်းနှင့်အတူဆက်လက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် သူမအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီးမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးဇာတ်စင်ကမင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကကုမ္ပဏီကိုစွန့်ခွာသွားစေမယ်ဆိုရင်သူမအတွက်အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်ရလိမ့်မယ်။
လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ကွဲပြားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်မှာမူဖြစ်သည် ခင်ဗျားဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိမယ်၊ တွေးတောစရာမလိုဘဲပျော်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်။ အကယ်၍ မင်းကအရာအားလုံးကိုစဉ်းစားလွန်းရင်မင်းဟာရူးသွားလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့မင်းသွေးဆောင်ဖြားယောင်းနိုင်တဲ့ထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီးကိုမနှစ်သက်တော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
သင်သည်မည်မျှပင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မည်မျှပင်ချိတ်ဆက်ပါစေ၊ သင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်မည်သို့ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ ထွက်ပြေးရန်သင်ယူရန်အရေးကြီးသည်။ အမှုအရာရုပ်ဆိုးသောအခါသင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြေးရန်လိုအပ်သည်။ သူဖြားယောင်းသွေးဆောင်သောအမျိုးသမီးသည်သင်၏ဘဝကိုပျော်ရွှင်စေရုံထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးစေပါကသူမ၏ခင်ပွန်းသည်အမြဲတမ်းရှိနေပြီးအမြဲတမ်းပုန်းအောင်းနေရခြင်း၊ သင်ထွက်ပြေးရန်သင်ယူခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်များစွာအကျိုးရှိလိမ့်မည်။
လက်ထပ်ပြီးသောအမျိုးသမီးကိုသွေးဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ အောင်မြင်မှုရရန်သင်ပိုမိုသိလိုပါက၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အားနည်းအချက်များ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်သလဲ။
219 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
၎င်းသည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်ရုံသာမကသင်၏အိမ်တွင်သင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားကောင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဟုထင်ရသည်။
ကောင်းပြီငါလက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူသွား၏ဒါပေမယ့်ငါခင်ပွန်းကသူမအသက်5နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကို shit မှန်ကြောင်းသူမမက်ဆေ့ခ်ျများဖတ်ပြီးသောအခါငါစကားပြောမှသာဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်ငါ 24 ရက်ကြာမြင့်သည်နှင့်ငါ 16 ကောင်းစွာငါ့ကိုထက်အနည်းငယ်အသက်ကြီး စစ်မှန်တဲ့သူမကငါ့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျလိမ့်မည်
မင်းဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် chingassss aaa သင့်ရဲ့ puuuta madreeee asshole နဲ့ငါမင်းရဲ့ puuuta maderreee ကိုငါနင့်ကိုနင်သိစေချင်တယ်
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး, ငါကအရမ်းကြိုက်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းများစွာသောလူဖြစ်ပျက်သော avitual အခွအေနေနှင့်ငါတို့အချိန်အတွက်ခွဲခြားလို့မရပါဘူး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါးဂုဏ်ပြုလွှာ
carlos marroquin အားပြန်ကြားပါ
Fernando Reyes ဟုသူကပြောသည်
အမှန်တရားကတော့၊ ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းစလုံးအတွက်တကယ်အသုံးဝင်သည်။ sancho နှင့် sanchado, hehehehe …။ ဒါကတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါ့ညီကငှက်ပျောတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးသူကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးအစဉ်အမြဲပြောခဲ့တယ်။ ငါထင်၏အဓိကအခြမ်းစိတ်ခံစားမှုကြောင်းထင်ပါတယ်။
FERNANDO REYES ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူမမှာသားသမီးတွေရှိတယ်၊ ကျွန်တော့်ထက်အသက်ကြီးတယ်၊ သူမအသက် ၃၂ ​​နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသူမကိုကြိုက်တယ်၊ သူမပြောတာကမင်းကိုငါအရမ်းချစ်တယ်၊ ငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမမေ့ပါနဲ့
အမှန်တရားကတော့ငါကြိုက်တယ်၊ သူ့ကိုငါချစ်တယ်။ အတားအဆီးကပြproblemနာမဟုတ်တာသေချာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ မင်းကိုကူညီနိုင်ရင်ငါအဲဒီမှာရှိနေတာငါတန်ဖိုးထားတယ်။ ငါအီးမေးလ်ကိုချန်ထားတယ်။ man_.com@hotmail.com ဖြစ်သည် ah 12 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ 2009, XNUMX တွင်ဖြစ်ပျက်အရိုးအေးမြသည်
မင်္ဂလာပါအမည်မသိပါ၊ မင်းရဲ့စိတ်ပျက်အားငယ်စာကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ပါတယ်၊ အမှန်တရားကတော့သူမနဲ့ဖုန်း၊ ကြိုး၊ ဆဲလ်နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့သူမကိုမကြာခဏနှောင့်ယှက်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်သူဘာတွေတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်၊ သင်မည်သည့်အချိန်တွင်သင်လိုချင်သည်ကိုမည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း၊ သတင်းစကားသည်နောက်ကျမည်မဟုတ်၊ ကံကောင်းပါစေဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်
ဆောင်းပါးခေါင်းပေါ်မှလက်သည်းထိမှန်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အလားတူအခြေအနေများကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးစိတ်ခံစားမှု၏အခြေအနေသည်အလွန်မှန်ကန်သည်။ မိန်းမသည်ယောက်ျားနှင့်မတူဘဲထိုဘက်ခြမ်းတွင်ပိုမိုရွေ့လျားသည်။ သူတို့၏အားနည်းချက်များကိုသိရှိရန်များစွာမလုံလောက်ပါ၊ သို့သော်အဓိက အရာအားလုံးဒါဟာအရာအားလုံးနောက်ကွယ်မှာမင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ရောသူမပါသူတို့လိုချင်တာနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးကွာချင်တာကိုသေချာစွာသိရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာထွက်လှည့်, ကထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်သတိပြုပါအလွန်အန္တရာယ်ရှိသောမြေပြင်အနေအထား။
အမှန်တရားကတော့ဆောင်းပါးမှာပြောသမျှအားလုံးကမှန်ပါတယ်။ သတိရရမည့်အချက်တစ်ချက်မှာသင်သည်ပျောက်ဆုံးနေသည့်အရာကိုအမြဲတမ်းမမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများနှစ်သက်သောထင်ရှားသောအရာများကိုလည်းသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဥပမာ - ငါသူမကိုပန်းပွင့်တဲ့အခါငါဘာမိန်းမမကြိုက်ဘူးလဲ။ ဒါမှမဟုတ်ချောကလက်လား ဒါဟာပေးဆောင်ကြောင်းသိသာတစ်ခုခု ... နှင့်အလွန်ကောင်းစွာ။ အာရုံကိုနိုးနိုးကြားကြားရှိစေပါ၊ သို့သော်သူ့ကိုဘယ်သောအခါမျှနှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုခြင်းသည်သူမအတွက်ပြproblemsနာများဖြစ်စေသည်။
ငါလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရှိရာအထက်တန်းကျောင်းတွင်အလုပ်လုပ်သူအတွင်းရေးမှူးခြေထောက် 10 နှင့် 40s အတွက်လမ်းလျှောက်ပေမယ့်ငါအခွင့်အလမ်းရဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးငါသွေးဆောင်ဖြားယောင်းချင်တယ် PS PS သူမကတစ် ဦး ရှိပါတယ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ အသက် ၅ နှစ်အရွယ်သမီးလေးဟားသာဟားဟားတာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး
ငါပြaနာတစ်ခုရှိတယ်၊ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်၊ နေ့တိုင်းတွေ့တယ်၊ ငါအသက်ရှင်တဲ့သူပါ၊ သူတို့အကြံပေးတာကိုပဲသိချင်တယ်။ သူမသည် ၂၁ နှစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ဖြစ်သည်
Freddy Hermogenes Miranda ဟုသူကပြောသည်
Freddy Hermogenes Miranda သို့ပြန်သွားပါ
ယေရှုခရစ် valadez ဟုသူကပြောသည်
ငါမိန်းမတွေတကယ်ခံစားချက်တွေကိုရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ပါ၊ ငါဟာကွာရှင်းပြတ်စဲနေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတယ်၊ ​​ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်မှာအဘယ်နည်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အကြံအစည်များနှင့်အကျိုးစီးပွားအတွင်းဖြစ်ခြင်းလူကြီးလူကောင်းဒီသူတို့နှင့်အတူပိုပြီးအောင်မြင်မှုရရန်ဖြစ်ပါသည်ဘာမှမအောက်မေ့ပါ။
jesus valadez အားပြန်ပြောပါ
oscar sevilla အားပြန်ပြောပါ
Francisco က lorin colorado ဟုသူကပြောသည်
jms, ငါထင်ပါတယ်ယောက်ျား - မိန်းမတန်းတူညီမျှမှုကိုဘယ်လောက်ပဲယူပါစေ၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေဟာယောက်ျားတွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးဟာအဖြစ်မှန်နဲ့အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ အခြားအရာအားလုံး၌ရှိသကဲ့သို့, ထိရောက်သောအတွက်ဤမျှလောက်။
Francisco lorin colorado သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်သည် ၂၂၀ ခန့်သွေးဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ရှိပြီဖြစ်ရာဤမျှလောက်များစွာသောလူအများတို့ကိုလှည့်ဖြားခဲ့ပြီးအမှန်တရားမှာဤသူသည်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်စာရေးသူမည်သူမဆို၏ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ဂုဏ်ပြုလွှာများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
သူကမင်းကိုငါ့နံပါတ်ပေးခဲ့တယ်၊ မင်းမှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်မင်းကိုအမှတ်အသားပြုဖို့ 3323130805
မင်္ဂလာပါ၊ ဤဆောင်းပါးသည်အကူအညီဖြစ်ပြီးလမ်းညွှန်ချက်အပြင်၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်အားကန့်သတ်ရန်နှင့်တစ်နှစ်ခန့်မေ့ထားရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်သူမ၏ရက်သတ္တပတ်နှစ်ခုတွင်မပါဝင်ခဲ့ပါ။ သူမလက်ထပ်ပြီးငါဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုကိုဘယ်သောအခါမျှစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ကြောင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိသည်။ ကျွန်ုပ်အကြပ်အတည်း၌ရှိနေသည်
ကောင်းပြီခင်ဗျာ။ မင်းပြောတာမှန်တယ်လို့မင်းထင်တယ်၊ ငါလည်းအိမ်ထောင်ကျအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတာဖြစ်ပေမဲ့ငါမတွေ့ခင်ကတည်းကကျွန်တော့်ဇနီးဝမ်းကွဲရဲ့ဇနီးကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ငါသူကိုစိတ်ဝင်စားပေမယ့်အဲဒါက ပြherနာကသူ့ကိုကျွန်တော်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမယ်ဆိုရင်သူမနဲ့ခင်ပွန်းကိုပြောပြပါ ဦး ။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါနဲ့သူမနဲ့အတူညအတူတူနေချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအလွန်ယေဘူယျအားဖြင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ထံရောက်ရှိရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။ စကားလုံးများ၊ အသံလေသံ၊ ကိုယ်ဟန်အနေအထား၊ အဝတ်အစား၊ ဖြစ်တည်မှု၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး စီသည်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခွဲစိတ်ရန် ... ဆွေးနွေးစရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားမည်သည့်နည်းဖြင့်အောင်နိုင်ခဲ့ပုံကိုအသေးစိတ်နှင့်အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲပြောပြရန်အကြံပေးလိုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံလူတစ် ဦး ကသူသည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည်ဟုထင်မြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မသိတာကသူမငါအရင်အောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့နားမလည်တဲ့၊ နားမလည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်၊ သူမရဲ့လှိုင်းလေထန်နေတဲ့နိုးထမှုကိုငါတို့မမြင်နိုင်ဘူး၊ အဲဒါကိုတောင်မှမသိဘဲကျွန်တော်တို့ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ .. များစွာသောငါ၌မိန်းမများစွာရှိသည်ဟုဆိုကြသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုလိုချင်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်မိမိကိုယ်ကိုအောင်နိုင်ခွင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်၊ အခြေအနေ၊ အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးများနှင့်လေ့လာသင်ယူပြီးအောင်မြင်လိုသည်တို့ကိုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုကိုဖတ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ လူတိုင်းအတွက်ကံကောင်းပါစေ
luis javier nuñez ဟုသူကပြောသည်
ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး၊ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ငါမယူတော့ဘူး
luis javier nuñezအားပြန်ကြားပါ
အရမ်းချစ်မြတ်နိုးပါ။ ကျွန်ုပ်အားချစ်မြတ်နိုးသောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အားအခြားအကြံပေးချက်များကိုပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်အားသူမထူးခြားသည့်ခံစားမှုဖြစ်စေရန်သူမကိုအိပ်ရာပေါ်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဟိုဆေး Reyes ဟုသူကပြောသည်
၁ သတိပညာရှိပါ ၂ သူမ ၃ ကိုအပြစ်မဲ့တဲ့လမ်းကနေထွက်သွားခိုင်းပါ။ ၄ သူမတုန့်ပြန်တဲ့အခါသူကလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောရှိလိမ့်မယ်။
jose reyes အားပြန်ပြောပါ
ငါအားလုံးကိုမင်းကိုချီးကျူးပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနင့်ကိုအကြံပေးချင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်ကငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းနှစ်သက်မိတယ်၊ သူမအိမ်ထောင်ကျတယ်၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ပြproblemsနာတက်တဲ့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့မိန်းမကသူမမှာ ၂၃ နှစ်ရှိပြီလို့ပြောတယ် သူမလှပပြီးကြိုးစားလုပ်ကိုင်သောခန္ဓာကိုယ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ အသိမိတ်ဆွေတစ် ဦး ကြိုက်နှစ်သက်သကဲ့သို့သူမလမ်းလျှောက်ပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ့အယူအဆအတိုင်းလိုက်နာရန်အဆိုပါ technique ကို။ ၎င်းသည် seductive အဆက်မပြတ်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်၊ သင်အမြဲတမ်းသရုပ်ဆောင်နည်းများဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်။ မိန်းမသည်သင်သူမကိုပျော်ရွှင်စေလိုလျှင်သင့်အားမတွေ့မီသိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်၊ လူတစ်ယောက်အနေနှင့်သင်၏အရည်အချင်းကိုသေချာစွာသိသောကြောင့်သင်နှင့်သိရန်ထိုက်တန်လျှင်။ ။ မင်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းသူမကိုအလိုဆန္ဒဖြင့်ကြည့်ပါ၊ မင်းရဲ့အကြည့်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လှည့်ပတ်သွားပြီးကောင်မချောဘဲခြေထောက်ကြားမှာသင်လိုချင်တဲ့အရာမှန်သမျှသည်သူမကိုရှုပ်ထွေးစေသည့်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲအိပ်ရာ။ သူမ၏တတ်နိုင်သမျှချော့မော့စွာ။ သူမကိုနှင်းဆီတစ်ချောင်းပေးပြီးသူမကလှပသည်ကိုပြောပြပါ။ သင့်အသားအရေရဲ့အနံ့ကအမွှေးနံ့သာတွေကိုဝတ်ဖို့မလိုပါဘူး
ငါနင့်အနားမှာရှိနေတုန်းငါနင့်ကိုတုန်ခါနေတယ် ။ မင်းနဲ့အတူရှိနေတဲ့သူကမင်းဟာထိုက်တန်သမျှအရာအားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်သိမြင်စေချင်တာကိုသူ့ကိုပြောပြပါ။ မင်းအခွင့်အလမ်းရပြီဆိုရင်သူမလက်ကိုနမ်းပါ။ ပြီးတော့သူမသင့်ရဲ့နှုတ်ကိုနင့်နှုတ်ခမ်းဖြင့်သူမခံစားနိုင်အောင်သူမနင့်ကိုသူမမြင်နေတာကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ပါနဲ့။ သူမဘာကြောင့်သူ့ကိုဘာကြောင့်ကြည့်ရတာလဲလို့သူမကမေးရင်အဲဒါမလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါ၊ သင့်မှာရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိနေပြီးအဲဒါကိုမဖျက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင်ကူညီပေးတာကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်, သင်ငါမူကားသင်မတွေ့ကြုံခံစားမိလျှင်, အမျိုးသမီး၏ပင်ကိုယ်သိနားလည်ကြောင်းသတိပေးရပါမည်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ထပ်ပြီးသားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းတာကလွဲရင်ငါတို့ရဲ့မိန်းကလေးမိန်းကလေးတွေလည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်လို့ပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ငါတို့မှာချို့တဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးသူမလိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်။ ဒါကအရမ်းရှုပ်ထွေးပေမဲ့ ... ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖက်မဖက်ကြဘူး!
၅ နှစ်ကြာခြေထောက်နဲ့နေတဲ့ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကျွန်တော်ချစ်မိသွားပြီ၊ ကျွန်မတို့ထွက်သွားပြီးဝိုင်သောက်နေကြပြီ။ ဘီယာပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းမူးလာတယ်။ သူမကသူမပထမကတိကဝတ်မှာအရမ်းခက်ခဲတဲ့ဘဝအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ သူမခင်ပွန်းဟောင်းနှင့်သူမသည်သူမကလေး ၂ ယောက်မွေးဖွားလာသည်နှင့်အတူသူမငို။ နှစ်သိမ့်ပေးမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသည်းအသန်နမ်းရှုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာနေခဲ့တယ်။ ငါသူမကိုဘော်ဒါဆောင်ကိုခေါ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမအစ်မစောင့်နေလို့သူမအိမ်ကိုသွားရမယ်၊ တက္ကစီစီးပြီးသူ့အိမ်မှာထားခဲ့တယ်လို့သူမကပြောတယ်။ နောက်တစ်နေ့တွင်သူမနှင့်စကားပြောပြီးလျှို့ဝှက်ထားရန်ပြောခဲ့သည်။ သူမကပြောလိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ၄ ရက်အတွင်းကော်ဖီသောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစာစားဖို့သူမကိုဖိတ်ပြီးသူမကနေ့လည်မှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ဖို့ဘယ်လိုယူနိုင်မလဲဆိုတာမင်းကိုကူညီပါ။
ကဗျာဆရာရူးသွပ်တစ်ဝက်နဲ့ Troubadour ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသော javier အဖြစ်ကပြောပါတယ်
Poeta၊ Medio Loco Y Trouvador သို့ပြန်သွားပါ
နွားထီး Julio Cesar ဟုသူကပြောသည်
ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ ထင်မြင်ချက်တစ်ခုသာထည့်။ မရှိခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ကစားရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာထောက်ပံ့ရေးများလွန်းခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းကိုကျစေသည်။ သူတို့မြင်လေ၊ ကြားလေလေ၊ လူတစ် ဦး သည်သင့်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်မှုနည်းလေလေ၊ ခေတ္တယာယီဆုတ်ခွာပေးခြင်းသည်သင့်အားသင်နှင့်ပိုမိုပြောဆိုစေလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းရှားပါးမှုသည်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုတိုးစေကြောင်းသတိရပါ။
Toro Julio Cesar ကိုပြန်သွားပါ
Wooooo, ငါထင်တာတွေ၊ ငါ့အမျိုးသမီးတွေပဲ၊ လူတစ်ယောက်ကငါ့ကိုဒီလိုနည်းနဲ့သိမ်းပိုက်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲ။
ရည်ရွယ်ချက်မှာအခြားသူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်ရေးရာသူ၏အတွေးဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာအရူးအမူးစစ်မှန်တဲ့အဲဒီမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းအားဖြင့်လူသားအားလုံးအားပေးသည်။ သွေးဆောင်မှုကြံစည်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောတင်းမာမှုသည် ပို၍ ကြီးမြတ်သောဆန္ဒ၊ အလိုဆန္ဒနှင့်ပျော်မွေ့လေလေဖြစ်သည်။ seduction သည်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားသူအားအောင်နိုင်ရန်၊ သင့်ကိုသူတို့အပေါ်မှီခိုရန်နှင့်၎င်းကိုထုတ်လွှတ်လိုသောဆန္ဒသည် ပို၍ ဖန်တီးလေလေ၊ ပြီးခဲ့သည့်မှတ်ချက်များ၌ကဲ့သို့, လက်ထပ်မိန်းမတို့ကို seductive ၏ဘာသာရပ်နှင့်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာသွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုတွေသာမကခင်ပွန်းဖြစ်သူလည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုများကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကသူတို့နှင့်ပါ ၀ င်သည် (၎င်းကိုမပြည့်စုံမှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်ရန်သတိပြုပါ)၊ သူမအလိုဆန္ဒများနှင့်အတွေးများသည်သူမချစ်သူများကိုအပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုအကြိမ်ကြိမ်နှိုးဆွပေးသည်။ ဤသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြားအလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူသို့မဟုတ်ဆိုင်မှလက်ထောက်တစ် ဦး ကိုသင်ဆန္ဒရှိလျှင်သူသည်တစ်ခုခုကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စာရိုက်ခြင်းတွင်အခက်အခဲတွေ့နေရသဖြင့်သူ၏အတွေးပျက်သွားသည်။ seductive ဗျူဟာများစွာရှိပြီး၊ အားလုံးသည်လိင်ဆက်ဆံရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကန့်အသတ်အများဆုံးသော၊ ကြာမြင့်စွာအနိုင်ရပြီးဖြစ်သည့်သွေးဆောင်မှုအပြီးတွင်လိင်မှုကိစ္စသည်လွတ်မြောက်လာပြီးထိုအပြန်အလှန်ဆွဲဆောင်မှုကိုသက်သေပြနိုင်သော်လည်းလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်ကိုယ်တိုင်သည်သူမဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏အစ မှနေ၍ သူမအားဝိညာဉ်ရေးရာအောင်နိုင်ရန်အလွန်ကောင်းသောမဟာဗျူဟာဖြင့်အလွန်ထင်ရှားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သူမအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်သူမအတွက်မမေ့နိုင်သောအရာဖြစ်သည့်မည်သည့်နည်းဗျူဟာကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟုကျွန်ုပ်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူမမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုသူမဖျက်ဆီးချင်တာကိုငါကိုယ်တိုင်အရသာကောင်းချင်ချင်တယ်၊ ငါပြန်ချင်တယ် ...
မင်းသိတဲ့အတိုင်းမင်းဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါ၊ သူဟာအသက် ၃၀ လောက်ရှိပြီးသားသမီးရှိတယ်။ ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီ။ သူမဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်ပြီးအိမ်ကိုလာပြီးအဘွားနဲ့အဒေါ်တွေကိုဆေးဆိုးဖို့လာတယ်၊ ငါသူမနှင့်စကားပြောပေမယ့်ငါသူ့ကိုငါကြိုက်တယ်နှင့်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး ...
မင်္ဂလာပါ၊ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ ထိုနေရာတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားလှုံ့ဆော်သည်ဟုခံစားရသည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရှိနေသောအခါ၎င်းသည်မြုံလာခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိခြင်း၊ အမှား၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအမှား သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာသူမပြောပြရဲတော့ဘူး။
အကြောင်းအရာသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်၌ကျွန်ုပ်ထက်အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသူမနှင့်သူမခံစားခဲ့ရသည့်အခြားနေ့တွင်သူမနှင့်လက်ထပ်ထားသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သူမနှစ်သက်သောအရာကိုသဘောကျကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ငါသူမကိုစိတ်မ ၀ င်စားခဲ့ပေမယ့်သူမလက်ထပ်ထားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ငါနောင်တရနေတဲ့စိတ်ကိုငါနောင်တမရ၊
ငါအလုပ်ဖော်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူမသည်အိမ်ထောင်ကျသည်။ သူမကကျွန်ုပ်အားတိုက်ရိုက်မပြောပြသော်လည်းသူသည်၎င်းသည်စွန့်စားခန်းဖြစ်သော်လည်းစိတ် ၀ င်စားကြောင်းသိသော်လည်းသူသည်မူးယစ်ဆေးစွဲနေပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲနေသောကြောင့်ငါဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုငါနှစ်သက်သည်။ သူမ
ဒီကိစ္စအပေါ် မူတည်၍ နှစ် ဦး စလုံး၏ခံစားချက်နှင့်ကစားခြင်းသည်အမှန်တကယ်မရိုးသားဟုထင်မိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံပျော်စရာဖြစ်ခဲ့လျှင်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးများအဆုံးသတ်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ယောက်ျားဖြစ်လျှင်သူတို့သည်စတင်သင့်သူများဖြစ်သည်။ သင်တစ်စုံတစ်ရာကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ဆိုပါကသင်၏စွန့်စားမှုကိုနိမ့်ကျစေမည့်ဆက်ဆံရေးသည် ...
Luchito lopez ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုမိန်းမတစ်ယောက်လိုကြိုက်တယ်၊ ငါ့ကိုထင်တယ်၊ ချစ်ကြည်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကျော်သွားမှာကိုကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမကို "လှပသော" (သို့) "လှပတဲ့" လို့ငါခေါ်ပြီးသူမကြိုက်တယ်လို့ပြောပေမယ့်သူမကိုရှက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဖြစ်နိုင်လို့လား။
Luchito Lopez အားပြန်ပြောပါ
ငါလက်ထပ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရွေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ သူ့ယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာငါနားလည်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသူမကိုအောင်အောင်မြင်မြင်အကြံပေးနိုင်မလား။
သင်၏ကြက်နှင့်အတူအလွန်တောင့်တင်းသောပုံတစ်ပုံရိုက်။ မင်းကိုခွေးကဲ့သို့လေးလေးကောင်ကိုချစ်လိမ့်မည်၊ ချစ်မြတ်နိုးမည်၊ ဓာတ်ပုံကိုစာအိတ်တစ်လုံးထဲထည့်ပြီးအနီရောင်ကော်ဇောတစ်ချောင်းနှင့်သူ့အားလူကိုယ်တိုင်ကမ်းလှမ်းပါ။ ပြီးတော့သူမနားမှာအရမ်းနူးညံ့ပြီးကော်ဖီဒါမှမဟုတ်နေ့လည်စာစားဖို့ပြောတာပါ။ ချက်ချင်းပဲပြုံးပြီးချက်ချင်းထွက်သွားပြီးအလုပ်ကနေထွက်လိုက်ရင်မင်းကိုချစ်တယ်။ ချိန်းထားတဲ့နေ့မှာမင်းကသူမကိုအရသာရှိမယ်လို့ငါပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ဖုန်တွေကြားကသင်ပြိုကွဲသွားတဲ့စကားများကြားမှာခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်။ သူမ၏ခင်ပွန်း၏ဘေးတွင်သူမ၏မပျော်ဘဝအကြောင်းကို, အဲဒီမှာသငျသညျအစဉ်အမြဲသူမ၏အကြောင်းပြချက်ပေးခြင်းနှင့်သူမ၏ပြီးသား cuckold ခင်ပွန်းဆန့်ကျင်အထီးကျန်စိတ်ကူးများပံ့ပိုး, အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပေး, အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုပေး, သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပေးရမယ်; သငျသညျသူမ၏စကားကိုနားထောငျနေစဉ်သင်သူမ၏နောက်တဖန်သူမ၏နားကိုနားထောင်ရန်နှင့်တိတ်တဆိတ်, ကလေးတစ် ဦး ကဲ့သို့သူမ၏အသားအရေနမ်းနေစဉ်, သင်သူမ၏နှင့်အတူအကောင်းခံစားမိကြောင်းသူမ၏မှတိုးတိုးပြောလိုက်သည်, သူမ၏ခင်ပွန်းကသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားသောကြောင့်ကျေးဇူးတင် မင်းဘယ်လောက်ကံကောင်းတာလဲမင်းသူမကိုမင်းရဲ့လက်မောင်းတွေ၊ ect, etc မှာထားဖို့လိုတယ်။ အဲ့ဒီမှာသူမဟာသူမရဲ့ဘဝအကြောင်းနဲ့မင်းခေါင်းကိုနွေးထွေးစေလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူနမ်းပြီးသင့်ကြက်ကိုနို့ရည်ကိုမြှုပ်နှံမယ်။ မင်းရဲ့ဘဝမှာသူတို့တစ်ခါမှမတူခဲ့သလိုမင်းကိုမင်းကသူမကိုချစ်စေချင်တယ်။ အခုကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြတ်ပြီးမင်းရဲ့တပ်မက်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ စိတ်ရောဂါကင်းမဲ့စွာသူမကိုစို့စို့ပါစေ။ သင်၏ကြက်ကိုသူမပါးစပ်ထဲထည့်ပြီးသူမကြည့်ရှုနိုင်အောင်သူမမျက်လုံးများတွင်ကြည့်ရှုရန်ပြောပါ ခင်ဗျားဘယ်လောက်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ၊ မင်းကသူမကိုစုတ်ပြတ်နေစေပြီးချိုမြိန်မှုတွေနဲ့နွေးထွေးပျော့ပျောင်းပြီးရုတ်တရက်ချစ်ခင်တွယ်တာပြီးသူမကိုခွေးလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေအောင်လုပ်ပါ၊ လေးယောက်မှာတင်ထားပြီးသူမရဲ့တင်ပါးကိုကိုက်ရမယ်။ သူမဆံပင်အားဖြင့်သူမသူမ၏နှုတ်ခမ်းကိုရှာဖွေ, သင်သူမ၏နားရွက်မှကောက်သောအရာကိုပြောပါ, နောက်ဆုံးတော့ xaval, ငါသင်ကအရမ်းလွယ်ကူသောအခါငါအနည်းငယ်ညံ့ဖျင်းသောမြင်ပေမယ့်တ ဦး တည်းအရာတစုံတခုကိုမေ့လျော့တော်မူလျှင်, သင်ရလျှင်သင်အချို့ org ရှိလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ပြtheနာများစတင်လာပါက xaval ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတကျိပ်တပါးသောသူတို့၏ရှပ်အင်္ကျီများထဲသို့မ ၀ င်ပါ။ ထိုမိန်းမနှင့်သင်ဆက်ဆံရသည်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုမမြင်ပါ။ သတိပြုပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည်ကဒေးဗစ်ပါ။ ကျွန်တော်ဟာလက်ထပ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ၊ ငါတို့တွေအများကြီးစကားပြောရတာပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမကိုငါအရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး၊ သူမငါ့ကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလည်းပါ၊ ဒါပေမယ့်သူမဟာငါနဲ့အတူမှားယွင်းစွာစားမိရန်ကြောက်လန့်ပေမယ့်ငါကြိုက်တယ်၊ အောင်မြင်အောင်ငါလိုချင်တယ်၊ မင်းငါ့ကိုငါ့အီးမေးလ်အကြံပေးချက်အချို့ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ever_27_07@hotmail.com
တကယ်ကောင်းတဲ့နည်းပရိယာယ်တွေ၊ အောင်ပွဲအတွက်ငါမူကားသူမနှင့်ဝေးရာသို့ထွက်ခွာသွားသည်၊ ငါအရမ်းချစ်ခဲ့သည် ,,,,,,,,,,,,
ငါမှာလည်းအတူတူပဲ။ ငါအိမ်ထောင်သည်မိန်းမအကြောင်းကိုအရူးဖြစ်၏။ သူမအတွက်တော့သူဟာဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့အလှအပအားလုံးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့တစ်ခါတစ်ရံမှာခက်ခဲပါတယ်။ သူကငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါသူ့ကို ၈ နှစ်နီးပါးသိပြီ သူမကကျွန်မနှင့်တစ်ချိန်ကကောင်းကောင်းစကားပြောဆိုခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့ခံစားရမည်ကိုသူသိသည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်အားအခြားအရာများထက် ပို၍ ချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့်သူမခင်ပွန်းကိုချစ်ကြောင်းသူမပြောခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုပြောဖို့မျှော်လင့်တာပါပဲ ကျနော့်အချက်ကတော့ဒီဟာတွေကြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် (အထူးသဖြင့်ငါတို့နှစ် ဦး ကြားမှာ) ဒီအထူးဆက်ဆံရေးကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ယောက်ယောက်ကိုတွေ့ရင်ကျွန်မတို့နှစ် ဦး စလုံးမနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ထပ်တူအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်စေ့စပ်သောလူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမနှင့်ခင်ပွန်းသည်သို့မဟုတ်သမီးများနှင့်သူမကိုတွေ့ပါကသူမအစဉ်အမြဲလေးနက်ပြီးနောက်မှကျွန်ုပ်လက်ကိုယူလျှင်ဖြစ်စေ၊ ။ ငါသူမကိုကြိုက်နေတုန်းပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ ငါသူမကိုအလွန်ချစ်ပါတယ်။ သူမမိသားစုသို့မဟုတ်သူမ၏အိမ်ထောင်ရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူမသည်ငါ့ကိုလုပ်ရန်လမ်းညွှန်တစ်ခုပေးလျှင်သူမကကျွန်ုပ်အားနမ်းခြင်းထက်မကနှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားပါ။ သူ့ကိုချစ်ကြလော့။
ကျွန်ုပ်သည်ယောက္ခမ၏အိမ်၌နေထိုင်ပြီး၊ ယောက္ခမတွင်သားတစ်ယောက်နှင့်တစ်ညလုံးသူ့ကိုချစ်သောအံ့မခန်းဖွယ်မိန်းမနှင့်သီးခြားအိမ်တစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုရူးသွပ်စေပြီးမည်သည်ကိုသူအားမပြောဝံ့ခဲ့ပါ။ သူဟာအရမ်းများလွန်းပေမယ့်ငါကလိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ရင် ...
ကောင်းပြီ၊ ငါ့ယောက္ခမရဲ့ဇနီးကိုငါကြိုက်တယ်၊ ငါသူ့ကိုဘယ်လိုအောင်နိုင်မလည်းမသိဘူး၊ တစ်ညလုံးသူမကိုချစ်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာအနည်းငယ်ပေးပြီးသူမရဲ့ ဦး ခေါင်းထိပ်ကနေသူ့ကိုနမ်းခဲ့တယ်။ သူမ၏လက်ချောင်းများ၏နောက်ဆုံးအစွန်အဖျားရန်။
ဟိုင်း၊ ငါ Ales ပါ။ ကျွန်တော့်အစ်မကိုချစ်တယ်။ အမှန်တရားကတော့သူနဲ့ပြုံးရယ်တာကတစ်ခါတလေပြုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကပုံမှန်လား၊ တစ်ခုခုလားမသိဘူးဆိုရင်ငါ့ညီကမပေးဘူး သူမလိုချင်သောကြိုက်နှစ်သက်သောအချက်များမှာအမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သူ့ကိုရေလောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်ထံသင်မည်သို့ချဉ်းကပ်ရမည်ကိုသိရန်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ပေးပါသည်။ ..
Edgar Martines cortes ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်းးငါ Edgar ပါ။ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုချစ်တယ်။ သူမမှာရင်သားကောင်းမနေဘူး။
Edgar Martines cortes မှစာပြန်ရန်
ammmm hello, ပိုက်ကွန်ကဘာကြောင့်သူတို့ကြိုက်သလဲဆိုတာမသိပေမယ့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပါးစပ်ကလိင်ဆက်ဆံတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပေမဲ့ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုနှစ်သက်တာပေါ့၊
ငါ eeeeeeeeeeeeee ဖမ်းသောသူတို့အဘို့မျက်စိ
eyyyyyyyyyyy ဒါပေမယ့်ငါ lalo ကိုကြိုက်တယ်
Cesar Montalvo Paredes အားပြန်ပြောပါ
ငါအများကြီးအများကြီးလိုပဲ၊ သူကအိမ်ထောင်ပြုပြီ၊ ၁၀ နှစ်ပြည့်ပြီ၊ သူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တယ်ငါမကြည့်နိုင်တော့ဘူးသူမကျွန်တော့်ကိုခေါ်လာတယ်။ သူမတက်တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူကအမေရိကန်ကိုလာကြည့်ချင်တယ်။ မကြာခင်မှာပဲသူမအနားခွာနိုင်သမျှဖြစ်နိုင်သမျှ၎င်းကိုငါကြိုက်နှစ်သက်ပြီးချစ်စရာကောင်းပါတယ်ငါ JE FE စစ်ဆေးရေးမှူးပါ။ သူဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်၊ အလုပ်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော့်ကိုမြင်တယ်၊ အမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ် ။ သူမကိုသူမချစ်အောင်တခါတခါတောင်မှသူမချစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ငါလက်ထပ်ထားသောမိန်းမနှင့်ချစ်သောပြaနာရှိသည်။ သူ၌ ၁ နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီးသူမမှာ ၂၂ နှစ်ရှိပြီးယောက်ျားမှာ ၄၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ သူသည်ညအချိန်တွင်လေ့လာသည်။ အမှန်တရားကကျွန်ုပ်ကိုသူမကြိုက်ကြောင်းမည်သည့်အခါကမျှမပြောခဲ့ပါ။ သူမကသူမကိုချစ်ကြောင်းသူမကသိပြီးသားသူမရဲ့ပန်းရောင်စာတွေ၊ ချောကလက်တွေ၊ သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေကိုပို့လိုက်လို့သူမကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ သူမဟာငါဆိုတာငါသိတယ်။ Valentine's Day နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူ့ကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ လူတိုင်းကသူ့ကိုလူအားပြောပြရန်ပြောသော်လည်းငါအကူအညီလိုအပ်သည်။
ငါနှစ်ယောက်စလုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ကြသောငါ့နှမယောက္ခမကိုချစ်မြတ်နိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမယူခဲ့ပါ၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ၊ သူမ၏ခင်ပွန်းကသူမကိုများစွာမပျော်မရွှင်ဖြစ်စေခဲ့သည် သူမထိုက်တန်သလိုဆက်ဆံပါ။ ကျွန်တော့်ဇနီးကကျွန်မတို့ကိုဘာမှမမျှဝေပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။
saul crespo barreera ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်ယောက္ခမ၏အိမ်တွင်နေထိုင်ပါသည်။ သူသည် ၄၅ နှစ်ရှိပြီးသူမသည်လှပသော၊ alegree နှင့်အလွန်မကောင်းသော၊
သူမမှာကလေးသုံးယောက်ရှိတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကအိမ်ကိုသိပ်မတော်တဲ့၊ အိပ်တော့မယ်။ သူကသူမကိုလှည့်လိုက်ပေမယ့်သူမကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်…ဒါပေမယ့်သူမသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ထွက်ပြီးသူမရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမကဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်…အမှန်တရားကငါ့ကိုမနာလိုဖြစ်စေတယ်…
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသူကကျွန်ုပ်ကိုကြိုက်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းသူကသူမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုမသိသောကြောင့်သို့မဟုတ်သူရုတ်တရက်သူမမိခင်ကိုမနာလိုသည်ဟု ak အားပြောပြရန်သူကိုသူမကြိုက်ကြောင်းသူမပြောဝံ့ပါ။ တစ်နေ့ငါသူ့ကိုစကားပြောနှင့် cerbesas အချို့ယူရန်သူကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ သူမကကျွန်ုပ်ကိုဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ထိုအခါငါသူမကိုဖုန်းခေါ်လိုက်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကကျွန်မကိုဖြေလိုက်တယ်။ သူမရုတ်တရက်သူမရဲ့သမီးကဆဲလ်ဖုန်းကိုကိုင်ပြီးပြaနာဖြစ်စေတယ်။ ငါဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူမကိုပြောပြပြီးသူမကသူမကလေးတွေကိုစွန့်ခွာရန် Avia kon kien မဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ။ အတိတ်မှဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခု မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်သံသယအနည်းငယ်ရှိသေးသည်။ ငါ့သမီးအကြောင်းမေးတော့သူကငါ့ကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ဖြေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောတယ်။ မင်းသမီးကိုမနာလိုလို့မပြောပါနဲ့။ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတလေသူမလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ထိုအခါငါသူ့ကိုငါ့သမီး၏ကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျတျောနှငျ့ငါ komer ဖို့လမ်းလျှောက်ဖို့သွားဖို့သူ့ကိုဖိတ်ကြားပေမယ့်သူသည်မိမိသမီးမကြိုက်ဘူးသူမကဘာမှမသိခဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကတိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်သူကပြောသည် သမီးကငါ့ကိုမပြောပါဘူး ... ဒါပေမယ့်ငါတို့မထားခဲ့ကြဘူးဘာလို့ငါသူမကိုပြောလိမ့်မယ်လို့ငါပြောခဲ့တာဒီနေ့ထိငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလို့သင်ထင်တယ် ... သူမကငါကကောင်းတယ်လို့ပြောပြီး သမီးနဲ့အတူပြproblemsနာတွေရှိနေတယ်၊ ​​သူမကကျွန်တော့်ကိုသဘောတူတယ်။ ရှောလု၊ ငါ ၂၆ နှစ်ရှိပြီ။ ငါသူမကိုဖုန်းခေါ်ပြီးငါသူမကိုငါကြိုက်ကြောင်းပြောဖို့ပြောမလားမသိဘူး။ သူမသမီးကိုတစ်ခုခုပြောမည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်
saul crespo barreera မှစာပြန်ပါ
Carlos rosales garcia က ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကြိုက်ကြောင်းပြောရန်စာရေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမအလွန်လှပသည်။ သူမမည်မျှလက်ထပ်သည်ကိုအလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ သူမယောက်ျားကလက်များကိုကိုင်ထားသည်ကိုသူအမြဲတွေ့မြင်သည်။ ငါသူမကိုအမြဲတမ်းအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်၊ ငါသူမကိုစိတ်ထဲမှမဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့၊ သူမကိုနေ့စဉ်စိတ်ထဲထားလျက်သင်သူမ၏အကြံဥာဏ်အချို့ပေးနိုင်သလားသို့မဟုတ်သူမလည်းကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သက်သည်ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
carlos rosales garcia သို့ပြန်သွားပါ
အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်၎င်းထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်။ ရှင်သန်ကြီးထွားသောအမျိုးသားသည်ထိုမိန်းမဘဝ၏အားနည်းချက်များကိုကြုံတွေ့ရသောအချိန်တွင်ရောက်ရှိလာခြင်း၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းဝါကြွားခြင်းမရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သင့်အားနားမထောင်နိုင်ခြင်း၊ သူမအတွက်အမှန်တကယ်ရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် ပြနာများ။ သူမနည်းသောသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သောအရာများကိုချိုးဖဲ့ရန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဘ ၀ ကိုမ ၀ င်ပါနှင့်၊
အလွန်ကောင်းသောထင်မြင်ချက်များ ...... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
alex vega ဟုသူကပြောသည်
အကြံဥာဏ်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါသိသမျှအရာအားလုံးကိုသိတယ်၊ ငါသူတို့ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ သူတို့ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲမ ၀ င်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာထားဖို့လိုတယ်။
alex vega သို့ပြန်သွားရန်
အမှန်တရားကတော့ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဒီအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်။ သူနဲ့မတွေ့နိုင်တော့ဘူး။ သူမသွားနေတာကိုမြင်ရတာကျွန်တော် ၀ မ်းသာမိပါတယ်။ သူမရဲ့တင်ပါးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်သားတွေကိုဒါမျိုးလုပ်ခြင်းမှမမြင်နိုင်ပါဘူး။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများ၏သားရေ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တွင်မရှိနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ခံစားရသောအရာကိုပင်မပြောနိုင်ပါ။ ငါ (ငါတကယ်မလိုချင်ဘူးတောင်မှ) ဒီအကြောင်းကိုမေ့ထားဖို့လိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါဟာငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုခချမ်းသာအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါမိန်းမနှင့်အတူတစ်ညအတူနေဖို့ငါ့အသက်ကိုပေးလိမ့်မယ် ... ။ တစ်ညတည်းသာ
guadalajara အတွက်စိတ်ပညာရှင် ဟုသူကပြောသည်
ကျနော့်အမြင်အရခင်ဗျားမှာအိမ်ထောင်သည်တစ် ဦး နဲ့လက်မထပ်ရသေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စာရင်းထဲမှာသိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်အရာအားလုံးရှိတယ်။ ငါသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခဲ့ပုံကိုကြိုက်တယ်။ ဒီစာရင်းနဲ့မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဤအမှန်တရားများနှင့်အတူမှားယွင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်!
ဟယ်လိုအကြံဥာဏ်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်၊ သူတို့ကကျွန်တော့်အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ အိမ်ထောင်သက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ၄၂ နှစ်ရှိတယ်၊ ၅ လအကြာမှာတွေ့ဆုံမိတယ်၊ သူမချစ်တာကိုသဘောပေါက်သည်အထိသူမသာကြိုက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ငါနှင့်သူမ၏ငါ၏, ငါတို့ပြီးသားတစ်လနှင့်တစ်နှစ်ခွဲဆက်ဆံရေးရှိပြီးသားကျနော်တို့အတော်လေးကောင်းစွာခံစားနေကြသည်
ဒန်နီ mxli ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလားပထမ ဦး စွာဤဆောင်းပါးသည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ပြည့်ဝပါသည်။ တစ်နှစ်ကျော်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏ခင်ပွန်းကိုလျစ်လျူရှုထားပြီးဖြစ်သည်။ လှသောအဆင်းနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်၊ ထိုသူသည်လဲ။ သေသည်တိုင်အောင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့သောအခြေအနေမျိုး၌ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သည်မိန်းကလေးနှင့်အတူရှိနေသည်၊ သူသည် ၂၄ နှစ်ဖြစ်ပြီးသူမမှာ ၄ နှစ်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်သူမ၏နံနက်စာကိုယူလာပြီးသူမစားရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူမကသူမကိုကောင်းတဲ့အရာတွေပြောနေတယ်။ အသေးစိတ်ကျတယ်။ ယခုသူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝနေသော်လည်းကျွန်ုပ်လက်မထပ်သေးပါ !!!! သူမနည်းနည်းလေးကြောင့်ဇနီးကိုလျစ်လျူရှုမထားဘူး !! လူတိုင်းကံကောင်းပါစေ !!!
danny mxli အားပြန်ပြောပါ
Ruben AS ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော (၈) လကကလေး ၃ ယောက်ရှိပြီးလှပသောအသက် ၄၀ အရွယ်ရှိအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၅၁ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဇနီးနှင့်ခွဲနေပြီး ၇ နှစ်ကြာသည်။ ငါပြောချင်တာကဒီဆက်ဆံရေးဟာအတွေ့အကြုံကောင်းတွေများစွာနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်၊ ​​ကွန်ယက်မှရင်းနှီးမှုရခြင်းနဲ့ငါတို့စတင်ခဲ့တယ်။ သူမဟာရှေးရိုးစွဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေကမှန်တယ်၊ အရာအားလုံးစိတ်ခံစားမှုပိုင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ မှလွဲ၍ သူမသည်ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်သူမမည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုတန်ဖိုးထားသည်မဟုတ်ပါ။ အပိုပေါင်များပင်သူမသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ အခုတော့ငါအခုထိငါစိတ်ရှည်သည်းခံပါပြီ၊ ငါတို့ကရုပ်ရှင်တွေကိုသာသွားကြပြီဆိုပါစို့၊ ပန်းခြံအချို့နှင့်စားသောက်ဆိုင်များသည်မကြာမီပြုလုပ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုမိုတယ်လ်တွင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ရက်အနည်းငယ်သာကြာခဲ့သည်။ Monterrey ။ ကျွန်မရဲ့ Pretty Lady ကိုနမ်းတာကငါတို့အတူတူနေတဲ့အခါမမေ့နိုင်စရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
Ruben AS ကိုပြန်ပြောပါ
အဆိုပါ sortero တုံ့ပြန်ပါ
ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခု !! ငါလက်ထပ်ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုသိမ်းပိုက်ချင်တယ်၊ သူကငါ့ရဲ့အိမ်နီးချင်း၊ သူက ၃၅ နှစ်၊ ငါက ၂၃ နှစ်ဖြစ်တယ်။ ငါကတော့မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ။ ကျွန်ုပ်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ထို့နောက်မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည်
ငါနှင့်အလုပ်လုပ်နေသည့်အမျိုးသမီးနှင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဟုထင်သည်။ ဘဝအခြေအနေများကြောင့်သူမအနားတွင်ရှိနေရမည်။ သူမချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်အောင်လုပ်ရန်စဉ်းစားသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသူမကကျွန်ုပ်ဇနီး၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့နင်ငါ့ကိုဘာပြောပြောငါပြောတာလည်းမသိဘူး
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမည်သို့သွေးဆောင်ဖြားယောင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ သို့သော်သူမစတင်ခင်မတိုင်မီခင်ပွန်းဖြစ်သူအားသိသင့်သည်။ သူသည်မည်သူသည်မည်သူသည်ဂရုစိုက်သင့်သည်ကိုသိလိမ့်မည်။ နှင့် Mensioned ခြေလှမ်းများပေးခြင်းအားဖြင့်သူမ၏လက်အား caress ပုံစံနှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်သူမကိုလည်ပင်းတွင်နမ်းပါ။ သူမနမ်းထားသောနမ်းခြင်းကိုနမ်းပြီးနမ်းလိုက်သည်နှင့်အချိန်တိုင်းသူမကသူမအားပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။ အသံသည် seductive ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးမရောက်ရှိမှီမျက်လုံးများနှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါစေနှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်သောမင်းကိုချစ်သောစကားစုကိုဖော်ပြပါ။ တစ်ဖန်တိုက်ခန်းသို့ရောက်လျှင် link ကိုဆက်သွယ်သောအခါ၊ ထပ်မံခေါ်ရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းစွာထားသော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သည့်စနစ်တကျထားရှိခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသားတစ် ဦး ၏ပုံမှန်တိုက်ခန်း၊ အတိတ်ကာလမှအခြားအမျိုးသမီးများ၏ဓါတ်ပုံကိုဘယ်တော့မှမသိမ်းဆည်းပါနှင့်အတိတ်မှသင့်အားသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဓာတ်ပုံပါရှိသော်လည်းအခန်းထဲတွင်ရှိနေပါက အခြားသူကမမြင်နိုင်သည့်နေရာ၊ n ရိုးရှင်းပေမယ့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုရှိရှိဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏အတွေးအမြင်ကို alejandro ကိုအချစ်တွေးခေါ်မှု၏အစဉ်ပျော်ရွှင်မှုကိုအမြဲပေးသောအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဟဲလိုကားလို့စ်၊ အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ပါ၊ သူတို့မှာသူငယ်ချင်းတွေမရှိကြဘူး၊ ဆန္ဒနဲ့အပျော်အပါးလိုမျိုး၊ သူတို့ပျော်မွေ့ချင်တဲ့လူရဲ့အသက်၊ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကဘယ်လိုလဲ၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတွေလို့ပြောနိုင်တယ် အမျိုးသမီးများသည်အဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးရှိသောအမျိုးသမီးများကိုရှာဖွေကြသည်။ တစ် ဦး ကလက်ထပ်ထိမ်းမြားသောကြောင့်တစ် ဦး သည် ပို၍ ပညာရှိသည်၊ အခြားတစ်ခုမှာလိင်ဆက်ဆံမှုပိုကောင်းသောအသက်တာဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အခြားသူတစ် ဦး ၏အမျိုးသားနှင့်အခြားသူကိုပျော်မွေ့ခြင်း၏နှစ်ဆအဓိပ္ပာယ်ကိုပိုမိုခံစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သုတ်လိမ်းပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားသားရေကို ပေး၍ အပြည့်အဝပျော်မွေ့ပါ။ သင်၏အမှတ်အသားကိုထားခဲ့ပါ။ သို့မှသာသူမအမြဲတမ်းသင်၏ခံစားချက်နှင့်မမေ့နိုင်သောမှတ်ဉာဏ်ရှိလိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ချိန်းတွေ့သည်မှာ ၄ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်အရာရာတိုင်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာမိသည်။ ပြproblemနာသေးသေးလေးကြီးကသူမကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးနေ့တိုင်းသူမကိုပိုပြီးလိုအပ်လာတယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့သူမခင်ပွန်းနှင့်ဆက်ပေါင်းသင်းခြင်းကမှားသည်ဟုထင်ရသော်လည်းသူနှင့်အတူသင်မည်သည့်အချိန်၌ခံစားရသည်ကိုသင်မည်သည့်အချိန်တွင်လုပ်ရမည်နည်း။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလူတစ်ယောက် ... နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ... အလွန်ကောင်းသောစမ်းသပ်မှု။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လက်ထပ်ပြီး၊ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်သွားမည်။ အသက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီ၊ သူကသူအလွန်သဘောကျကြောင်းပြောခဲ့သည်။ တစ်နေ့သူသည်ကျွန်ုပ်၏သမီးကိုတွေ့ပြီးသူသည်သူမကိုသဘောကျသည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ အမှန်တရားကတော့သူချစ်ခဲ့တာပါ
မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုးချဲ့ချင်ရင်ငါတွေးမိတယ်၊ သူငယ်ငယ်လေးကတည်းကဒီကောင်လေးကြည့်ရတာသဘာဝပဲလို့ငါထင်တယ်။ ငါကရင့်ကျက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ အသက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကငါပြောနေတာကြောင့်ငါစကားပြောနေတာပါ အလုပ်မရှိတော့ဘဲဆုံးရှုံးသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းမရှိဘူး။ မင်းကိုစိတ်ဝင်စားရင်မင်းကိုအီးမေးလ် elnortonmx yahoo.com.mx မှာထားလိုက်တယ်။
Hello Yoana ကိုပြန်ပြောပါ
ဟယ်လိုသူငယ်ချင်းများ၊ ငါဆင်တူသောအခြေအနေများမှတဆင့်သွားမည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၅ လခန့်ကကျွန်ုပ်သိသည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းကွဲ၏ဇနီးသည် ၃၆ နှစ်နှင့် ၂၃ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တရားကို၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှမပြောပြခဲ့ပါ၊ သို့သော်ငါရင်းနှီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အိုင်ယာလန်ဖြစ်တည်မှုအားလုံးသည်တစ်နာရီလျှင်ထောင်နှင့်ချီရှိခဲ့ပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမပေးခဲ့ပါ၊ သူမနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်ဟူသောအတွေးကိုသူမမုန်းတီးခြင်းနှင့်တစ်နေ့လုံးစဉ်းစားတွေးတောခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်သူ၏မျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငါမေ့မရနိုင်တဲ့အရာနောက်တစ်ခု၊ ငါဘယ်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်မှာနေတယ်၊ ​​ဘယ်မှာနေခဲ့တယ်၊ သူမငါ့ကိုမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်သွားမယ်၊ သူမအသုံးမပြုခဲ့ဘူး၊ သူမလာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမလာမယ်၊ ကျွန်တော့်ကိုမလွဲမသဲမပြောတဲ့သူအားလုံးပြောပြတာ၊ ရက်အနည်းငယ်လောက်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။ အိုင်တီကဖြတ်သွားလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါမမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခု၊ သူ့အကြောင်းနောက်ထပ်တွေးကြည့်တော့၊
Peter Punk ဟုသူကပြောသည်
လေးစားပါတယ် !! အလွန်ကောင်းမွန်သောမှတ်ချက်များ၊ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးများကျွန်ုပ်၏ရုံးခန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်၊ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကအိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး၊ လက်ထပ်ထားသူတစ် ဦး နှင့်အတူနေရန်၊ ငါဟာငါ့မိန်းမကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ငါနောက်ဆုံးမှာလဲကျသွားတယ်၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာပိုပြီးသတိပညာရှိသူဖြစ်ရမယ်။ ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်မရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လျှို့ဝှက်ချက်အားလုံးကိုသိမ်းထားခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြားသောမိန်းမတို့အားကုထုံးကိုငါပေး၏, သူတို့ကိုငါချစ်တတ် ... လူတိုင်းအတွက်အကွံဉာဏျ: တောင်းပန်, ပေးနေ ... ။ အဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီး, မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဒီနည်းကိုဒီနည်းဗျူဟာနှင့်မဟာဗျူဟာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အားလုံးအထက်တွင်, စိတ်ပျက်စရာတွေအများကြီးကျော်, အိုင်တီရွှေရောင်စည်းမျဉ်း IS ပင်ထာဝရ
PETER PUNK သို့ပြန်ပြောပါ
adrian Hernandez Martinez ဟုသူကပြောသည်
adrian hernandez martinez အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်ဖုန်းနံပါတ် 0445512904996 Aten မှထွက်ခွာရန်မမေ့မှီငါရေးထားပြီးပြီ။ adrian Hernandez Martinez
အဲလ်ဆာ BROSON ဟုသူကပြောသည်
ELSA BROSON အားပြန်ပြောပါ
Juan Carlos Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်မိသွားပြီး ၆ နှစ်ကြာသူမအားသိရှိခဲ့ပြီး ၃ နှစ်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုသူသိထားပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အလုပ်တစ်ခုရှိသည် ဆက်ဆံရေး, အချိန်သူမကငါ့အဘို့အရာတစ်ခုခုကိုခံစားမိစတင်ခဲ့ပြီးသူမလည်းသုံးနှစ်ကြာလက်ထပ်ခဲ့သည်, ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌သူမကငါသည်လည်းငါရိပ်မိသမျှသောအမှုအပေါငျးတို့သညျငါ့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းနေကြောင်းငါ့အဘို့ရှင်းလင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အဆက်အသွယ်ကာလအတွင်းသွေးဆောင်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြproblemနာမှာသူသည်သူမ၏မိသားစုနှင့်အတူသို့မဟုတ်အလုပ်မှထွက်သွားသောအခါသူသည်နောင်တရ။ ငါ့ကိုမနေရန်ပြောရန်၊ သူမ၏မိသားစုသည်များစွာပိုမိုတန်ဖိုးရှိကြောင်း၊ အတူတူပင်, ဒါပေမယ့်သို့သော်လည်းငါသည်သူမ၏ဆုံးရှုံးချင်ကြဘူး။ သူမသည်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးသည်။ သူမပြောခဲ့တာကသူမလိုချင်တာကိုသူမသိရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမခင်ပွန်းကိုလိုချင်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူး၊ ငါ့ကိုချစ်ရင်ငါနဲ့အတူရှိနေမှာပါ။ သူမကကျွန်မကိုတကယ်ချစ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ်သူမကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့တာလားဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊
JUAN CARLOS GONZALEZ သို့ပြန်ပြောပါ
Billy GUERRERO ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း J ကားလို့စ်
BILLY GUERRERO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ချစ်လှစွာသော Juan Carlos: မမေးပါနဲ့ !!! အကယ်၍ ထိုမိန်းမသည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ သူမအတွက်သွားပါ၊ သင်မှတ်ချက်ပေးရန်အလွန်အရေးကြီးသောအရာမှာသူသည်အနည်းငယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သူမကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေခဲ့သည်။ သူမနှင့်သူမ၏လက်ရှိဆက်ဆံရေးနှင့်သူမတို့၏သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများကိုတိုက်ခိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု ... ကောင်းမွန်သောလူကြီးတစ်ယောက်အနေနှင့်သူမ၏ပန်းများကိုယူဆောင်လာပြီးသူမအားစွန့်လွှတ်ပါဟုပြောလိုက်ပါ။ ဤအရာသည်သင်၏လက်နက်များထဲသို့ ၀ င် ရောက်၍ သင်ဤအရာကိုရရှိပြီးမှ၊ စိတ်မပျက်ပါနှင့်ဤအချက်ကိုသတိရပါ ပေးခြင်း ... လာပါ၊ သူမ၏နမ်းခြင်းကိုပေးပါ။ အကယ်၍ သူသည်သင့်ကိုဆက်ပြောသင့်သည်၊ မပါရှိလျှင်၊ မိန်းမသည်သင့်အိပ်ရာပေါ်တွင်ဘယ်တော့မှ (မည်သည့်အရာသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး MUSTIA ဖြစ်သည့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးဖြစ်သနည်း ... ) အကြောင်းပြချက်ကြောင့် ... ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အာမခံပါသည်၊ သို့သော် GOLDEN REGLE သည်အလွန်ထူးခြားစွာဖြစ်ရမည်၊ အကြောင်းမှာ IT သည်သွားနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ဦး အတွက်အလွန်မှားသင့်သောကြောင့်သင့်ယုံကြည်မှုကိုယုံကြည်ပြီးသင်၏ကဒ်ပြားများကိုကောင်းစွာကစားပါ။
သေချာတာပေါ့၊ ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ကား၊ မှတ်ချက်ကောင်းတစ်ခုကတစ်ခါတစ်ရံမှာမိန်းမတွေကငါတို့ကိုတောင်ပံပေးတာမှန်ပေမယ့်တိုင်းတာရင်သူတို့ကဖြတ်တောက်ပစ်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ငါဟာ ၆ လအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအောင်နိုင်နေတယ်၊ သူမ၏ခင်ပွန်းကသူသည်သင်၏လိပ်စာအတိုင်းလျှောက်နေသည်ကိုပြသည်။ ဒါကကျွန်မကိုအရမ်းသဘောကျသွားပြီးသူ့ကိုလက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခု (လက်ဆောင်များ) အဖြစ်စပြီးသူမနှစ်သက်တဲ့အတိုင်းအတာအထိသူမနှစ်သက်တယ်။ သူမအတွက်ငါသွားပြီးဘာမှမယူလာတဲ့အခါသူမကကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်၊ ကြောင်းနှင့်အတူပြက်လုံး! သငျသညျအသေးစိတျကိုကြိုက်ပါမညျနှင့်ဝါးမြိုခြင်း၏ဖြစ်စဉ်တွင်ပါသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားပါသလား ???? သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့သူဟာငါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်ငါဖြည်းဖြည်းချင်းပျော်မွေ့ချင်လို့သူ့ကိုမကြည့်ခဲ့ဘူး။
FARABUNDO MARTI ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်မငယ်ရွယ်တဲ့အပျိုစင်ဘ ၀ တုန်းကကျွန်မရဲ့ဝမ်းကွဲတွေထဲကတစ်ယောက်ဟာနိုင်ငံရေးအရဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အပြောင်းအလဲအတွက်ခင်ပွန်း (ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအစ်ကိုဝမ်းကွဲ) ကအခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တီးခတ်နေတယ်။ သူမသည်အထီးကျန်ဆန်နေသည့်အတွက်ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်ခဲ့သည်၊ ၀ တ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်သည်၊ က brama အတွက်အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့သည် !!! အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ကြောက်။ အလှည့်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့ကောင်းသောနေ့တစ်နေ့မကုန်မှီတိုင်အောင်အဆုံးသို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင်ကျွန်ုပ်အပြစ်ကင်းစင်သွားသည်။ သူမလက်ထပ်ခဲ့သော်လည်းအလွန်ဂရုမစိုက်သောသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမကျွန်ုပ်၏ဆရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဝန်ခံနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၅ နှစ်ကျော်ချစ်သူများဖြစ်ကြသည်၊ သူ၏ဝမ်းကွဲသူနှင့်အောင်နိုင်သူများနှင့်သူမကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ စီးပွားရေး ... ဒီနေ့ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်မိမိကိုယ်ကိုအမွှမ်းတင်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသူကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုမနှမြောပါ။ သူသည်အရက်သောက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (သို့) သူသည် BURLESQUE ကဲ့သို့သောကြောင့် ...
ငါပြောနိုင်သလားဒီလူကိုရွေးချယ်မထားဘူး၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ FUCK တွေရွေးမလဲ၊ ဒီအခြေအနေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့သူ၊ တစ်ခုတည်းကစနိုင်သေးပေမယ့်အဆုံးသတ်မှာတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ရမယ် ...
တားမြစ်ထားသောအပြင်နိုင်ငံခြားသီးနှံများထက် ပို၍ ထူးခြားသည့်အရာ…
FARABUNDO MARTI သို့စာပြန်ပါ
ငါအငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း, ကောလိပ်မှမိန်းကလေးများနှင့်အတူအစဉ်အမြဲကောင်းသောအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်။ သွားဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုပြီးဆုံးသောအခါကျွန်ုပ်သည် ၂၅ နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးရပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအိမ်စဆောက်ရန်စဉ်းစားထားသည့်ချစ်သူမိန်းကလေး။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဟာခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ပါ၊ သူလည်းပါ ၀ င်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘာသာတရားနှင့်ယုံကြည်မှုများအပေါ်တွင်အလွန်ယုံကြည်သူဖြစ်သော်လည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်မှအမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပျံဝဲနေခဲ့ကြသည်။ ချာ့ချ်ကတခြားညီအစ်မတွေတောင်ငါနဲ့ပရောပရည်လုပ်နေတယ် တစ်ခါကညီအစ်မတစ် ဦး ကသွားကုသမှုခံယူရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်၊ သူမ၏သူငယ်ချင်းနှင့်ဆက်ဆံရန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ အစ်မသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အလွန်နီးစပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သူမကိုဝင်ခွင့်မပေးပါ။ မိန်းမနှင့်လက်ထပ်ပြီးမိန်းကလေးအနည်းငယ်သာရှိသောချို့ယွင်းချက်ရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်၊ ငါ GRECIA FABIOLA နဲ့စပြီးချိန်းတွေ့ခဲ့တယ်၊ သူမနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါ့ဘ ၀ မှာတစ်ခါမှမချစ်ဖူးဘူး၊ ခရစ်ယာန်မိန်းကလေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်၊ ငါ့ကိုဘုရားကျောင်းမှနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်၊ ဟုတ်ကဲ့ ... ဒါကြောင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များရှိခဲ့ပေမယ့်သူမအဘို့ငါအဘို့အလျော့နည်းငါအိုင်ဒီလ်, ကြီးစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ထွက်ခွာပြီးမကြာမီကျွန်ုပ်သည်ယနေ့အချိန်အထိတစ်ခါမျှပျော်မွေ့ခြင်းမရှိသောလိင်၌ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ သူမကိုယ်ဝန်ရခဲ့သည်။ သူမမှာအလွန်အန္တရာယ်များသည့်ကိုယ် ၀ န်ကြောင့်သူမသည်သူမဆေးရုံသို့သွားသောကြောင့်သူမသည်နိုင်ငံရေးမိသားစုမှတွေ့ရှိခဲ့သောအခါအဆိုးဆုံးမှာ ... ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ MOM ကိုချိုးဖောက်ပြီးတဲ့နောက်သူမကိုခေါ်သွားတယ်။ ငါအလုပ်ကနေအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုစကားမပြောကြတော့ဘူး။ ပထမဆုံးငါ့ကိုပြန်လှည့်လာတာကငါ့အမေပဲ။ အရာရာတိုင်း၊ အရာရာတိုင်း၊ ငါ့ရဲ့အယူဝါဒ၊ အရှက်ကွဲခြင်း၊ ငါဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တဲ့သူ။ ဒီနေ့ငါဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနေထိုင်ပြီးပုံပြင်တစ်ပုဒ်လိုအသံဖြစ်ပေမဲ့လည်းမှန်ပါတယ်။ ကြီးမြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအောက်မေ့သတိရမိသည်။ သင့်ရှေ့တွင်မည်သူ့ကိုမျှမဖြစ်သင့်၊
Juan ဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
juan hernandez အားပြန်ကြားပါ
Cornelio Lliguicota ဟုသူကပြောသည်
ငါအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကြိုက်ပေမယ့်သူမကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကိုငါမသိဘူး။ FB ကိုအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မလား။
Cornelio Lliguicota အားပြန်ပြောပါ
ငါအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကိုငါမသိဘူး။ ငါတို့သုံးနှစ်အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Cristian ba ဟုသူကပြောသည်
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဒီ link Yigolo ရဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေ၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့အလေ့အကျင့်အသစ်တွေအတွက်ကျွန်တော့်ကိုများစွာအကျိုးပြုလိမ့်မယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါကပြောသည်နှင့်ငါပြောပါလိမ့်မယ်, မိန်းမတို့, ငါတို့အဘို့အယောက်ျားသည်အိမ်အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ......
cristian ba သို့ပြန်သွားရန်
အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရန်အရေးကြီးကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။
Guillermo URbanos ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ကိစ္စရပ်မှာငါအမြဲတမ်းရေကာတာတစ်ခုပြီးသွားပြီ။ ငါ့မှာသဘာဝပဲ။ ငါအမြဲတမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်၊ ငါ့ကိုတားဆီးတဲ့သူကိုငါ့သွားကိုထည့်လိုက်တယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တစ်နှစ်ကြိုးစားနေသည်တစ်ယောက်မှပြုတ်ကျသည်။ သူမချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်ဆိုပါစို့၊ သူမသည်သူမ၏ဘဝကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သို့သော်သူမနှင့်တစ်ချိန်ကသာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ငါ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ နှင့်ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြားအပြင်ဘက်တွင်ကလေးတစ် ဦး ရှိသည်။ သူမနှင့်ဆက်မသွားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး
Guillermo URbanos သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်အမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ gefa ကိုနှစ်သက်ပါသည်။ သို့သော်သူမမှာကလေး ၂ ယောက်နှင့်လက်ထပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ သူမအသက် ၂၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့် ၂ နှစ်တာသွားနေပြီးယခုကျွန်ုပ်လည်းသူမကိုကြိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် အများကြီးငါပြောလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုကူညီနိူင်လျှင် zxavier-13@hotmail.com
ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ရောဂါခံစားနေရပြီးနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီများနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည့် DSM V နှင့် CIES 10 အရစာအုပ်များအရကျွန်ုပ်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတီထွင်မှုဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဝန်ခံပါတယ်, ဒါပေမယ့်တကယ်ကအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး လူနာအဖြစ်ပြုမူသောအခါ, သူမအများကြီးပိုလက်ထပ်လျှင်, သူမ၏သွေးဆောင်ဖြားယောင်းစဉ်းစားပါ။ တကယ်တော့ငါဟာလူများစွာကိုအိပ်ရာဝင်စေခဲ့တယ်၊ ငါအကြိုက်ဆုံးတွေကအသက် ၃၅ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်တယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရသူတို့ကလူနာအားနည်းချက်ရှိသည့်နေရာတွင်အာဏာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုပြောပြီးယေဘုယျစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ရင်သား၊ ဝမ်းဗိုက်၊ အင်္ဂါဇာတ်စသည်ဖြင့်သာမကဆရာဝန်သည်အုပ်စိုးသူသို့မဟုတ်လက်ကိုကိုင်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်ထိရောက်တဲ့၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းမှာလည်းအားနည်းချက်၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေအများကြီးကိုသင်တွေ့ပြီ။ ငါဟာငါဟာအရမ်းအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုလို့အခြားအလုပ်အကိုင်တစ်ခုမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံရမယ်ဆိုတာငါသိပြီ။ ဒီဟာကိုရှောင်ရှားဖို့ဆိုရင်ငါဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်လုပ်ပြီးငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောင်းပြီးသူတို့အတွက်လိုအပ်တာတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ မှီခိုမှုတစ်ခုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ပြီးတော့စားပွဲပေါ်မှာတော့ဒီဟာကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ပဲကြီးမားတဲ့ရန်ပွဲတခုကိုတက်နိုင်တယ်။ set ... ဒါကငါ့ဘဝမှာမိန်းမတွေဘယ်လောက်များများချီတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါအစပြုတယ်။ ငါလက်ကိုစလိုက်တယ်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ကသူတို့ကိုသတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူကသူတို့ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ ဒါနဲ့ငါနမ်းလို့ပြောတော့သူတို့ကသူတို့ကိုမေးတယ်။ အိပ်ရာအတွက် ...
ငါလက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်ပုံကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူချင်တယ်
Braulio ပါ ဟုသူကပြောသည်
ဒီဆောင်းပါးဖတ်တာကကျွန်တော့်ကိုရှက်ကြောက်စေတယ်။ ၎င်းသည်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ရန်နှင့်ဖောက်ပြန်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာရှက်စရာကောင်းလဲ
တစ် ဦး queer ဖြစ်မထားပါနဲ့
FE CASTELLON ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံးအချက်များ…တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ အခြေအနေများ” ကိုရိုးရှင်းစွာပေးထားခြင်းကိုမရှာဖွေပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမျိုးသမီးများကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုပြက်ရယ်ပြုခြင်းမပြုရန်ကူညီသည်။ သူတို့ကိုစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများကဲ့သို့ဆက်ဆံသည်။
FE CASTELLON သို့ပြန်သွားပါ
ဟင့်အင်း၊ သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတာနဲ့အိပ်ရာဝင်စေချင်တယ်။ မင်းရဲ့မိခင်တွေလည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားကြတဲ့သူဖြစ်တယ်။ မူလတန်းကျောင်းကိုသွားဖို့ဆိုရင်သူတို့ဟာစာရေးတတ်ဖို့လိုတယ်၊ မသိတတ်တော့တာပေါ့။ ဒီမှာငါရေးတဲ့သူအားလုံးကအပူပေးချင်တယ်၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခြားသူရဲ့နို့ကလေးပါ။ !!!! လက်ထပ်ထားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သင်နှင့်တစ် ဦး တည်းလိုပင်လိုချင်သည်ကိုသူတို့မယူဆနိုင်ပါ။ ထိုကိစ္စတွင်အောင်မြင်မှုရသူအားလုံးသည်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဟေး, သူတို့ကလွယ်ကူသောကြိုက်တယ်နှင့်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်။
hahahahaha !!! HAHAHAJAJAA! ကြည့်ရအောင်။ တကယ်နုံပါတဲ့ manga! ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု (၃) ခုမှအပကျန်အပိုင်းများသည် ၀ မ်းနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး (အချို့ကခေါ်ဝေါ်ကြသည်) သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအခြားတစ်ဖက်မှ (ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်မိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ) ယောက်ျားများစွာသည်ထိုလိုင်းများကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်း။ မှားယွင်းသောအရာအဖြစ်ယူမှတ်ကြသည်။
လူကြီးလူကောင်း, မိန်းမတိုင်းကွဲပြားခြားနားသည်။ အိမ်ထောင်တိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာအချို့သည်သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးဘ ၀ တွင် "တစ်ခုခု" မရှိကြပါ။ အချို့သည်ပိုမို "လက်လှမ်းမီနိုင်မည်" ဖြစ်သော်လည်းဤအချက်သည်စင်ကြယ်သောလူသားအခြေအနေ၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေမဟုတ်ပါ။
ငါ "ဆောင်းပါး" အလွန်ငယ်ရွယ်ပြီး / သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး ဦး မှရေးသားရမည်ဟုငါထင်မြင်သည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်တစ်ခုအရ:“ ငါပြောနိုင်တာကမိန်းမတစ်ယောက်မရွေးဘူးဆိုတာငါပြောနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့အားမည်သည့်အချိန်တွင်ဆွဲဆောင်သည်ကိုသိကြပြီး၊ များစွာသောသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့“ ချော့မော့ခြင်း” ခံရခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲ (နောက်ထပ်နည်းစနစ်များနည်းပါးသောအမျိုးသမီးများနှင့်ပိုက်ကွန်များတွင်အမျိုးသမီးများအတွက်သတ်ဖြတ်ခြင်းများရှိသည့်ယောက်ျားများစွာနှင့်မတူဘဲ)
ယောက်ျားများ၊ လူကြီးလူကောင်း ... သတိပြုပါ။ မြှားများသည်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုသွားပြီးအမျိုးသမီးများစွာသည်သူတို့သူငယ်ချင်းများ (hehe) ကိုဂရုမစိုက်။ သူတို့ဘယ်တော့မှမည်သည့်သူနှင့်မဆိုနားလည်ရန်ချစ်ကြသည်ကိုသတိရပါ။ ငါဆိုသည်ကား၊ အကြင်သူသည်မီးဖြင့်ကစားတတ်၏ဟုဆိုပြန်၏၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးကံကောင်းခြင်း (သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မှာအကြံဥာဏ်တချို့ရှိရင်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကိုသိဖို့ဟန်ဆောင်မထားပါနဲ့။ တ ဦး တည်းကိုအာရုံစိုက်ပါနှင့်သင်တစ်သက်တာအဘို့အတာဝန်များကိုရပါလိမ့်မယ်!
ဝိုး! ထိုလတွင်သင်သည်အန်တီကျန်ခဲ့သည်။ မင်းကအရမ်းမှန်ကန်သည်၊ သင်သည်စုံလင်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုသာရှိသည်။ » FUCK !! သင်အိမ်ထောင်ရှိပါလား!!! ဟားဟား"
ငါ့ထံသို့ပေးပို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုသူအံ့အားသင့်သွားသည်၊ သူကပြောခဲ့သည်မှာ၎င်းသည် IT လုပ်ရန် DID လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ရရှိရန်မဖြစ်နိုင်ဟုထင်မြင်သည့်အရာတစ်ခုခုအတွက်တောင်းသည်။ * သင်ကိုယ်တိုင်သင်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်တစ် ဦး ၏အမည် (သုံးကြိမ် ... ) ... * လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်းသင်အောင်မြင်လိုသည့်အရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားပြီးထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ပါ (၆ ကြိမ်) ) ... * သင်နှင့်အထူးလူတစ် ဦး (သင်နံပါတ် ၁ တွင်သင်ပြောခဲ့သော) အကြားသင်ဖြစ်ချင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားပြီး (၁၂ ကြိမ်) သင်ကိုယ်တိုင်ပြောပါ။ (၁၂ ကြိမ်) * ယခုသင်ရွေးချယ်လိုသောဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုပြုလုပ်ပါ။ ။ * ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသင့်မှာအကြောင်းအရာ ၁၅ ခုကိုပေးပို့ဖို့ ၁ နာရီလောက်ကြာပြီးသင်တောင်းဆိုတဲ့အရာက ၁ ပတ်အတွင်းမှာပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်။ လူများများပို့လေလေ၊ သင်၏ဆန္ဒသည်ပိုမိုခိုင်မာလာလေလေဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤစာကိုလျစ်လျူရှုရန်ရွေးချယ်ပါကဆန့်ကျင်ဘက်သည်သင်၌ဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်အခါမျှထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………။
အနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အမျိုးသမီးမဆိုကျဆုံးနိုင်သည်။ ကလော်ဒီယာကျွန်ုပ်အစတွင်ရေးထားသည့်ဤလိုင်းများတွင်မရင့်ကျက်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမတွေ့ရပါ။ အမှန်မှာ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာအားလုံးကိုဖော်ပြပြီးလူတစ် ဦး စီအနေဖြင့်အကြံဥာဏ်ရယူရန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ အရှိန်အဟုန်အရဆုံး၊ ဆက်ဆံရေးအားလုံးသည်အကောင်းနှင့်အဆိုးများရှိသည်။ အဓိကအချက်မှာသားကောင်အားယုံကြည်မှုရရန်ဖြစ်သည်။ သူမတိုက်ခိုက်သင့်သည့်အချိန်တွင်သူကိုယ်တိုင်သင်အားမည်သည့်အချိန်တွင်တိုက်ခိုက်သင့်သည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်အားဆက်ကပ်အပ်နှံထားသော်လည်းကမ္ဘာကြီးတွင်လူအများစုသည်ဘုရားသခင်အကြောင်းမေ့လျော့ခံရပြီးသူတို့၏ရှင်သန်ရပ်တည်မှုကိုပိုမိုစိုးရိမ်ကြသည်။ စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်ဖျားနာသည်ဟုထင်ရသည်၊ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ငါနှင့်အတူတစ်ခုခုရှိသည်, ငါရိုးရှင်းစွာ hahaha ပြန်လုပ်။ သူတို့ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဘယ်တော့မှမယ်လို့ပြီးတော့ဝါကြွားသောသူတို့၏အပိုပျော်မွေ့ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သကျသွားတယ်, သိသာအမျိုးသမီးများအစဉ်အမြဲငါတို့နောက်တစ်ဆင့်သွား
ဟယ်လိုငါ ၃၅ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်နေတယ်။ သူမမှာ ၁၆ နှစ်သမီးလေးရှိတယ်။ သူတို့ကငါနဲ့ပရောပရည်လုပ်ပြီးငါ့အိမ်ရှေ့မှာနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါက ၂ ကိုတစ်ချိန်တည်းသွေးဆောင်ဖြားယောင်းဖို့နဲ့သူတို့ကိုထားဖို့မသိဘူး ငါ့ကိုသူတို့အိမ်၌ငါ
တစ်ချိန်ကအမျိုးသမီးကကျွန်ုပ်ကိုထိ မိ၍ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုကြိုက်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူမ၏ရင်ဘတ်တွင်ကြီးမားသောရင်ဘတ်ကြီးရှိပြီးလှပသောတင်းတိပ်ရှိသောကြောင့်သူတို့နှစ် ဦး လုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ခန္ဓာရှိကြောင်း၊ အမှန်တရားမှာအမှားကြောင့်အမှားဖြင့်ပါးစပ်ဖြင့်နမ်းခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။
ငါ 16 ရှိသည်
ဟိုင်း၊ ငါကောလိပ်တက်တော့ငါကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမအိမ်ထောင်ကျတယ်။ သူမကသူမယောက်ျားနဲ့အတူပြhadနာတွေရှိတယ်၊ ငါချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမကငါ့ကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူးလို့ထင်တယ်၊ ငါသူမကိုအနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲမသိဘူးငါဘာပြောရမှန်းမသိတာနဲ့ ps ငါသူမကိုမစဉ်းစားတော့ဘူး၊ သူမငါ့ကိုအရူးလုပ်နေတာ၊ သူကငါ့ကိုနမ်းရှုပ်မှုသုံးမျိုးသာပေးခဲ့တယ် ငါရည်းစားဖြစ်ခဲ့တာကိုငါပြောခဲ့တာကအဖြေပေးဖို့အချိန်ယူခဲ့ရတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဟာသတိပညာရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိခဲ့ပေမဲ့ငါသူ့ကိုနမ်းတာဒါမှမဟုတ်ပွေ့ဖက်တာကိုတောင်းတာသူငါ့ကိုမပေးချင်ဘူး ဒါမှမဟုတ်သူကကျွန်တော့်မွေးနေ့လိုပဲပါးပြင်ကိုဖက်ပြီးဖက်လိုက်တယ်။
တကယ်လို့ငါ Rcia Chaco မှ Natanon ဖြစ်ခဲ့ရင်အမှန်တရားကတော့ငါ melozas xq ဆိုတဲ့စကားလုံးအားလုံးကိုသက်သေထူတယ်။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ပြီးအမျိုးသားရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ဖန်တီးထားတာပါ။ ငါတို့ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့သူတို့ယုံကြည်တယ်။ ဒီအတွက်ငါတို့လှပတဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလျှော့ချပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့လှပမှုကိုတွေ့မြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြုန်းတီးပစ်ရမယ်။
ဟိုင်းငါနာတာပေါ့။ ငါထပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်မယ် သူမသည်သူမ၏လှပပြီးလှပသောလှပသောခန္ဓာကိုယ်အလှတရားကြောင့်ဤချိုမြိန်လှသည့်မိန်းမပျိုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းလာပြီးသူမသည် tb ကိုချစ်သော်လည်းသူသည်အိမ်ထောင်ကျသည်။ ထို့ကြောင့်သူ့ထံမှခွဲထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း x ကို conjugal ပြproblemsနာများသည်သူ၏ဘက်ပြန်ရတဲ့ x ကိုကျွန်တော်ဆက်လက် indesion sero တစ်ပြည်နယ်။ သူမငါ့ကိုအချိန်ဘယ်လောက်တောင်းခဲ့လဲ၊ အတူတကွဖြစ်ဖို့ငါပြန်လာတဲ့အခါအခြေအနေတွေကကွဲပြားလိမ့်မယ်။ ငါထင်တယ်၊ ငါသူမကိုချစ်တယ်၊ နာသန်နှင့် gabriela
ဒါပေမယ့်မိန်းမတစ်ယောက်မှာလင်ယောက်ျားရှိတာ မှလွဲ၍ ၁ နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်ရှိရင်ကော .. အခွင့်အလမ်းရှိသလား။ ဟုတ်တယ်၊ ငါရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနေတယ်။ ငါ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသူမအတွက်တစ်ခုခုခံစားနေတုန်းပဲဆိုတာသေချာတယ်။ ငါ့ကို .. ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးသူကကျောင်းမှာခံစားခဲ့ရ ... မျက်စိကန်းသောသူသည်ပင်သတိထားမိလိမ့်မယ်။ ငါထိုအမျိုးသမီးအကြောင်းကို ၅ နှစ်လုံးလုံးမသိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ထင်လျှင်သူမသည်သူမကိုလည်းစဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်ချင်သည်မှာပုံမှန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုသဘောကျ။ ကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ သူမရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသာပြောနေတာပါ။ မကြာသေးမီကသူမကိုဓာတ်ပုံအချို့တွင်တွေ့ခဲ့ပြီးသူမအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ သူမရဲ့အမှတ်တရများအားလုံးလျင်မြန်စွာရောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ရှိသည်။ ယခုအကွာအဝေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသီးခြားခွဲထုတ်သည်။ သူမအားဖုန်းခေါ်လိုသည်။ ငါဘယ်လိုလုပ်သိလည်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမတကယ်သွားချင်ရင်ငါသိဖို့လိုတယ်။ အရမ်းသိမ်မွေ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဂရုစိုက်ရမယ်၊ သူမ၏အသံ .. အောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုအကြံပေးနိုင်သောတစ်စုံတစ် ဦး ရှိပါကကျွန်ုပ်ထာဝရထာဝရကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်၎င်းတို့သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အရာများ၌မှန်ကန်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းစဉ်မှထွက်မသွားသင့်ပါ။ (ကျွန်ုပ်၏မြေယာတွင်သူတို့ပြောသကဲ့သို့) ခက်ခဲသောအမျိုးသမီးမရှိပါ။ မကောင်းသောဂျာကင်အင်္ကျီ (နည်းဗျူဟာ) သာလျှင်သင်တစ် ဦး ဦး ကိုကြိုက်လျှင်သူမကိုချဉ်းကပ်ပါ။ စကားပြောပါ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူမကိုနားထောင်ပါ။ သူမဘာလိုချင်သလဲ၊ သူလိုချင်တာကိုပြောလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခု
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အရာများ၌မှန်ကန်သော်လည်းသင့်လမ်းမှထွက်မသွားသင့်ပါ (ကျွန်ုပ်၏မြေယာတွင်သူတို့ပြောသကဲ့သို့)၊ ခက်ခဲသောမိန်းမမရှိ၊ ဆိုးသောဂျာကင်အင်္ကျီ (မဟာဗျူဟာ)၊ သင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကြိုက်လျှင်သူမထံချဉ်းကပ်ပါ။ စကားပြောပါ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူမကိုနားထောင်ပါ။ သူမလိုချင်တာနဲ့သူမလိုချင်တာကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အရာကသူတို့ကိုစိတ်မ ၀ င်စားစွာနဲ့စကားပြောဖို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုရှိရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘူး။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းလှပနေပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုအဲဒီလိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးဆိုတာမခံမရပ်နိုင်ဘူး ... ကောင်းပါတယ်။ ငါမှတ်ချက်တွေကိုကြိုက်တယ် ... ငါပစ္စုပ္ပန်မျှော်လင့်ပါတယ် သူတို့ကိုကောင်းကောင်းအစေခံလိမ့်မယ် ...
ငါအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်နှစ်အနည်းငယ်ကြာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ငါလည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပြီ၊ ချစ်မိသွားပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ခဏတာမကောင်းဖြစ်နေပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ၊ သူမကိုမည်သို့ထပ်မံအောင်နိုင်မည်ကိုမသိ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိပ်သိကြပြီ၊ ကုဒ်တွေ၊ ငါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၊ မနာလိုမှုနှင့်အခြားသူများလို့ထင်တယ်။ သူ့ကိုငါမစွန့်ခွာချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့အကြံဥာဏ်အချို့လိုချင်တယ်၊ အကြံဥာဏ်အချို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါနှင့်စကားမပြောခင်ငါဒေါက်တာတစ် ဦး အဖြစ်အမျိုးသမီးအများစုသည်ကျွန်ုပ်၏ရုံးခန်းသို့လာရောက်လာကြပြီးအများစုမှာလက်ထပ်ကြသည်။ ၂၃ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဤတွင်ရောက်လာသည်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကလက်ထပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုစတင်လာသည်နှင့်အမျှသူမက သူမငါ့ကိုတွေ့ရင်ငါ့ကိုပြောပါ ... ငါသူမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ သူမယောက်ျားကသူမကိုသူမဂရုမစိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြောပြတယ် ... သူမကကျွန်မကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာဝန်ခံခဲ့တယ်။ တစ်နေ့လုံးမှာလူမရှိခဲ့ဘူး။ သူမရောက်လာသည့်အချိန်တွင်သူမကိုနမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၀ ိညာဉ်များသည်အလွန်ပူပြင်းလာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ခွင်ကိုရိုသေလေးစားမှုဖြင့်ထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်မပြုလုပ်လိုပါ။ သူမစိတ်ဆိုး။ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ သူမမကြာသေးမီအချိန်အထိသူမကိုမတွေ့ဘဲ ၂ လနေခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူမတစ်ယောက်တည်းမလာခဲ့ပါ။ သူမ၏ယောက်ျားသည်ပထမ ဦး ဆုံးရောက်လာပြီးသူမသည်လည်းအလွန်လေးနက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်နှလုံးကျဆုံးသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအရာရာတိုင်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ... သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မည်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်တော်တော်လေးရုပ်ဆိုးသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာကိုဖောက်ဖျက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့နောက်ငါပြောရန်အလွန်ကျင့်ဝတ်မရှိသောကြောင့်သူတို့ကငါ့ကိုတရားစွဲဆိုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါအရူးအမူးခံစားခဲ့ရတယ်။ အရောင်တွေကငါ့မျက်နှာကိုပဲ။ ငါမပြောနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာကတော့သူမရဲ့ခင်ပွန်းကအရမ်းအေးတာပဲ၊ အဆိုးရွားဆုံးလူသားတွေလို့ခံစားရတယ်။ ငါတစ်နေရာရာမှာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်သူဟာတစ်စုံတစ် ဦး နဲ့အတူငါရှိနေမယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့၊ ငါအများဆုံး deplorable ခံစားရလိမ့်မယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဤမိန်းကလေးပြန်လာပြီးအမှန်တရားမှာသူသည်လှပသည်။ သူကသူပြောတာကသူဟာအရာရာကိုလုပ်နေတာလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ဟာမိုက်မဲတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ အရမ်းအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ ငါ့ကိုစိတ်ပူမိတာကဒီအမျိုးသမီးရဲ့မသန်စွမ်းမှုဖြစ်တယ်၊ ရက်အနည်းငယ်အကြာ၌ငါ့ကိုပြန် fuck ဆိုတဲ့ .. မကောင်းတဲ့ငါဒီလောက်တောင်ကြိုက်တယ်၊ သူမကိုအချစ်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ် ... ငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ပြီးတော့ငါတွေးမိတော့မယ်ဆိုတာပြောပြခဲ့တယ် ...
မင်္ဂလာပါ…အမှန်တရားဟာကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်
မင်းကနင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေကိုကျွေးမွေးဖို့လိုတယ်၊ ငါပြောနေတာနဲ့အမှန်တရားကိုကျေနပ်နှစ်သက်မှုကခင်ဗျားရဲ့လက်ရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ပြproblemsနာတွေရှိပေမယ့်သူမအိပ်ရာထဲမှာငါနဲ့အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်း၊ အမှန်တရားအမျိုးသမီးကတော်ရုံကောင်းတယ်၊ အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်၊ မိန်းမငယ်လေးတချို့လိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရှိတယ်။ သူမပါ ၀ င်လိုသောသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏မိုက်မဲရာဟုထင်လာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကကျွန်မကိုသူမနဲ့အတူရှုံ့ချချင်ပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကသူမနှင့်ကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်သည်တိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။
သင်ထုတ်ဝေတဲ့မှတ်ချက်ကအရမ်းတော်တယ်၊ တကယ်ငါ့ကိုကူညီခဲ့တယ်၊ ကျေးဇူးတင်တယ်
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဆင်တူသောအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။ အလွန်မှန်ကန်သောအရာများ၊ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်မှအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးပြီးသူမကိုလည်းသူမနှစ်သက်ကြောင်းသိပါသည်။ သူမယောက်ျားနှင့်လက်ထပ်ထားပြီးကလေးနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ငါထက် ၇ နှစ်ကြီးပေမယ့်ငါအရမ်းစွဲဆောင်တယ်။ သူမဟာသူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတယ်။ သူမနဲ့စကားပြောတော့သူမလက်ခံချင်စိတ်မရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် ငါသူမကိုချဉ်းကပ်လာခဲ့တုန်းက ... ငါဘာအမှားလုပ်မိလဲ၊ ငါမှားခဲ့လားဆိုတာငါမသိဘူး၊ တကယ်တော့သူမလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးနမ်းလိုက်တာပဲ။ ပထမ နေ့မှစ၍ သူမကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်။ သူသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးထို နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်မည်သို့ထင်မြင်မည်ကိုအနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်နေပါသည်။ မေးခွန်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာအကျိုးပြုပြီးကျွန်ုပ်လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်မှာ - ငါသူမကိုအနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသူမရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အိမ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့သူမလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ သူမအိမ်ကိုသွားဖို့သိပ်မလွယ်ဘူးအိပ်ရာ။ ငါမိန်းမကိုချစ်တယ်။ သူမနဲ့အတူရှိနေချင်တယ်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်သောအချိန် ...
ကောင်းပြီ၊ ဆောင်းပါးကောင်းလား၊ မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့တိုင်းတာတဲ့အတိုင်းအတာကိုတိုင်းတာလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပျင်းရိတဲ့တွင်းသာ။ အပြင်မှာ ... အဆုံးမှာယောက်ျားအားလုံး cu ... တစ်ခြား ... သာသူမကိုဂရုစိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရူးသွပ်တယ် ... ပြီးတော့မင်းလုပ်ရင်လူထုံ ... ... ha ... နှင့်ဖန်တီးသူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ထက်ပို။ ထူးဆန်းတဲ့ ... ဟက်တာ
ချစ်ခင်ရပါသော LUIS၊ သင်မနေထိုင်ခဲ့သည်မှာထင်ရှားသည်။ အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါသင့်လက်တွဲဖော်ကိုလုံခြုံသည်ဟုထင်မြင်မှားယွင်းစွာပြုမိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရုပြုမှု၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှု၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်အမျိုးသမီးများစွန့်ခွာသွားလျှင်၊ သူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ သူတို့ဟာလူတစ်ယောက်နဲ့အတူပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘဲဖြစ်လာတယ် ... ဒီဟာကငါမွေးဖွားတဲ့မုဆိုးတစ် ဦး အတွက်သေခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကအိပ်ယာပေါ်လာတာပဲ။ "တူညီတဲ့နှင့်အတူပေါင်မုန့်" ။ တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာဘာမှမလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အတွက်အိပ်ရာဝင်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။ ငါပြောတာကအသံမထွက်စေဘဲပြောတာပါ ဥပမာအားဖြင့် ဦး နှောက်ထဲမှာ ... ညာဘက်ကိုစော်ကားပြီးအပြစ်မဲ့တဲ့မင်းကမင်းရဲ့နစ်နာမှုကိုစွပ်စွဲတာဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ငါနင့်ပညာရေးကိုမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံမရှိရင်၊ မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအခြားမိန်းမတစ်ယောက်အပေါ်မှာတင်တဲ့အခါ ခင်ဗျားတို့ကတခြားယောက်ျားလေးတွေလိုလူသားမျိုးနွယ်ကိုအခြားတိုင်းပြည်မှာမျိုးစေ့ကြဲဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားလို့ပဲ။ ဒီအကြောင်းပြောတဲ့အခါမျိုးမှာမျိုးရိုးဒါမှမဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်၏မျိုးစေ့ကိုတတ်နိုင်သလောက်များများဖြန့်ဖြူးရန်ဗီဇကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီမှာနှိုင်းယှဉ်ချက်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့အများစုမှာအာရုံခံဆဲလ် ၂ ခုထက်မကသောလူသားများမွေးဖွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ မာ့က်စ်ကိုသင်ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ သူသည်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်မင်းကလက်စွပ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို ၀ ယ်သည်ဟုစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ၀ ယ်သည်ဟုထင်သော်လည်း၊ သင်လုပ်သည်မှာအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားရှိသည့်အမျိုးသမီးကိုဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သစ္စာမဲ့မှုဖြစ်ရန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၀ င်ရောက်သောအခါသူမဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုသဘောပေါက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားတုန်လှုပ်စေသည့်အတွက်ဖောက်ပြန်မှုသည်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အိပ်ရန်ရှာဖွေခြင်းထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်။ ယောက်ျားတွေထက်ပိုပြီးသစ္စာမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကပိုပြီးပညာသတိရှိပြီး၊ ငါတို့လိုဝါကြွားတာကိုမလုပ်ကြဘူး၊ ငါတို့ယောက်ျားကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ငါတို့အောင်ပွဲတွေအကြောင်းပြောကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့ကိုသင်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအမျိုးသမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်ကိုအားပေးသော… Emmanuel
ကောင်းပြီ၊ ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ အမှန်တရားကတော့ငါ့မှာလည်းရှိတယ်။ ငါအိမ်ထောင်ပြုခဲ့တာက ၅ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်တော့်ယောက္ခမလည်းအတူတူပဲ။ ဒါပေမယ့်နေ ၀ င်ချိန်အထိတိတ်တဆိတ်ငါချစ်မြတ်နိုးတယ်။ စကားလုံးမရှိဘဲအမြဲတမ်းအပြင်းအထန်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့သူနဲ့စကားပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့အားပြောပါလော့ဟုဆိုလျှင်၊ စဉ်းစား, wuuuao! ဒါကြောင့်သူတို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာမျက်မမြင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးများ၊ မျက်လုံးများပါးနမ်းစွာနမ်းရှုံ့ခြင်း၊ သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ... အားလုံးကသူ့ကိုငါကြိုက်ကြောင်းပြသသည်။ ကျွန်ုပ်သူ့ကိုပြောပြရာ၌သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုနောက်ထပ်စာရေးခြင်းမပြုဘဲငါ့ကိုရှောင်ရန်ကြိုးစားသည်။ သူ့ကိုငါမသက်မသာဖြစ်စေသည်ကိုနားလည်သောကြောင့်ငါလည်းလုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်းမနေ့ကသူ့ကိုတွေ့သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အနမ်းနှင့်နှုတ်ဆက်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏နှုတ်ခမ်းများကိုစုတ်ပြတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကဟန်ဆောင်နေပုံရတယ်။ သူဟာသူ့အစ်ကိုကိုမအောင်မြင်တာ၊ သူတည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ၊ သူ့အတွက်နှစ်သိမ့်မှုတွေမလိုချင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ငါဒါကိုနားလည်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့အတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာနဲ့တူတာကတကယ့်ကိုဆိုးဝါးလှတယ်။ သူတို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကိုကြောက်တာကြောင့်လွင့်မျောသွားတာကသူတို့ကငါ့ကိုပြောတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ပြီးငါတကယ်ကိုချစ်တာတောင်မှငါ့ကိုတကယ်ကြောက်တယ်ငါထင်တာထက်ငါတို့တစ်ခုခုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသိမှာကြောက်တာကငါတို့ကိုဒီလိုဖြစ်ပျက်တာပါပဲ။
ငါဆောင်းပါးကိုကြိုက်တယ်၊ ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေချင်တယ်၊ မကြာခင်ငါလုပ်မယ်။
ငါအခြားနေ့ကအကြံပြုသည်အတိုင်း, ငါသည်ငါ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်; ငါကဖျော်ဖြေရေးနှင့်အသုံးဝင်သည်မျှော်လင့်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်၏အပြုအမူကိုတုပရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းမှဝေးကွာသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အလေးအနက်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်လိမ့်မည်။
အခြေအနေကလေးနှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်၊ ငါဟာရင့်ကျက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်သည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ကြော့။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ ငါက macho (ငါမကူညီနိုင်ဘူး)၊ ရဲရင့်တဲ့သူ၊ ငါထင်ထားသည့်အတိုင်းများစွာသောလူကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌အလွန်အပြန်အလှန်ချစ်သောမေတ္တာရှိသည်; ဆီလျှော်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်သူဟာကျွန်တော့်ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး၊ သူကငါ့အသက်ကိုငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဝေးစေတော်မူပြီ ငါခက်ခဲအချိန်ခဲ့ပေမယ့်ငါကျော်ရတယ်။ ဆက်ဆံရေးအတော်များများပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မရဲ့အစိုးရ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့တိုတို၊
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကအခြေအနေများကြောင့်အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရသည့်အခြေအနေတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခဲ့ပြီးနှစ် ၃၀ အကြာတွင်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ငါကန ဦး cheeky, အကြမ်းမဖက်နီးပါးရိုင်းစိုင်းတဲ့အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တှေ့ဆုံပိုပြီးသို့မဟုတ်နည်းနည်းတိကျစွာဖော်ပြရန်။
ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သီးခြားဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါသူကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် -
«ပက်ထရီ, ကျွန်ုပ်အဖေနိုးလာသည့်အတွက်ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ခင်ဗျားကအဲဒါကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ ဒုတိယအနေနဲ့၊ အခြေအနေတွေကမှန်တယ်မဟုတ်ပေမယ့်၊ မင်းကိုမမေ့နိုင်ဘူးလို့မင်းကိုငါပြောမယ် ဒီနှစ်တွေအားလုံး၊ မင်းကိုမင်းကငါ့ကိုအပြစ်တင်ပြီးများစွာသောအရာတွေကိုငါ့မျက်လုံးထဲပစ်ချနိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကအကောင်းမြင်ရမယ်လို့ငါထင်တယ်၊ မင်းကိုငါအမြဲတမ်းလေးစားတယ်၊ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဘယ်တော့မှမပျက်ပြားခဲ့ဘူး၊ မင်းငါ့ ခင်ဗျားရဲ့ခင်ပွန်း၊ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး၊ ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာတစ်ခုခုဖြစ်တာ၊ ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုပြန်လည်စတင်။ အခုငါနင်နှုတ်ဆက်တော့မယ်။ ငါ့လက်ကိုင်နံပါတ်နဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုချန်ထားခဲ့မယ်။ သင်နှင့်သင့်လျော်ပါကငါ့ကိုခေါ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခြင်း၊ နူးညံ့ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုအားလုံးကိုပေးမည်ကိုသင်သိသည်။ ”
ငါဟာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသင်စိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာဒေါသ၊ မုန်းတီးမှုနဲ့အံ့အားသင့်မှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာစကားလုံးတစ်လုံးကိုဖော်ပြဖို့အခွင့်အရေးမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး၊ သူကငါ့လက်ထဲမှာစက္ကူစလစ်ကိုချန်ထားခဲ့တယ်၊
လက်ထပ်ပြီးသောမိန်းမနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်လှပသော်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းခြင်းသည်သင်နှစ် ဦး စလုံးသည်အခြားသူများကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲသင်နှစ် ဦး စလုံးလိုချင်သောအရာ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းခြင်းသည်ဤဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်သောကြောင့် နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သူငယ်ချင်းများကမလှည့်စားကြပါ။ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူမပေးနိုင်တာကိုသူမပေးတာ၊ သူတို့နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခြင်း၊ ဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်စေဘဲအဆုံးသတ်နိူင်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါစေ၊ သူမမှာမရှိတဲ့အရာတွေကိုပေးကမ်းခြင်းအားဖြင့်သူမကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ သူမကိုပေးခဲ့တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအချို့။ သူမဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရှုပ်ထွေးမသွားစေနဲ့။ ပိုဆိုးတာကသူမကိုချစ်ခင်တွယ်တာမှုမရှိဘူးဆိုတာသူမလက်ထပ်ထားပြီဆိုတာကိုသတိရပါ။ သင်ခံစားနေရသောအရာကိုခံစားလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်လှပသောဆက်ဆံရေးသာဖြစ်သည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာသံသယများနေဆဲဖြစ်သည်။ အထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ်ကတည်းကကျွန်ုပ်၏ယောကျာ်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသောမူးယစ်ဆေးစွဲနေသူဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ယောကျာ်းမှာသွေးဖြူနှင့်ပြwithနာရှိခဲ့သည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ အိမ်မှာမသက်မသာ၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အခြေအနေများနှင့်ပင်အိမ်တွင်းပြproblemsနာများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုများ။ ဒါကြောင့်တစ်နေ့မှာသူမကသူမငိုနေတာကိုတွေ့တော့သူမရဲ့ဘဝထဲဝင်ဖို့မရည်ရွယ်ဘဲသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကမ်းလှမ်းဖို့ချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်၊ သူမ (ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့လမ်းကိုသူမရှင်းပြဖို့အထိ) ဒီအကြောင်း (ပုံမှန်နဲ့ပုံမှန်လုပ်ရပ်တွေ) အကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ သူကသူမကိုမချစ်ခဲ့ပါ၊ သူမမနာလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးသူမကိုမထိမှီတိုင်အောင်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်သူမကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ သူမကျွန်တော့်ရင်ခွင်ပေါ်မှီပြီးငါဆံပင်ကိုညစ်ညူးခြင်းမရှိဘဲချော့သိပ်ခဲ့တယ်။ သူမရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးငိုနေတုန်းသူကကျွန်တော့်ခါးပတ်အမြင့်အထိလျှော့ချလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်ယောက်ျား၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံအနေအထားကြောင့်အဖုသည်အလွန်ထင်ရှားသောကြောင့်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲငါမင်းရဲ့အဒေါ်လိုငါဘာမှမတောင်းဆိုဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး၊ သူကအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပြောဖို့နောက်နေ့ပြန်လာဖို့သာပြောခဲ့တယ်။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတိုကိုဖြတ်ရန်သူသည်ငါ့ကိုသူအိမ်သို့ခေါ်လာရန်ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း၊ သူကသူမကလေးများ (၃) ကိုကုတင်တစ်ခန်းတည်းရှိသည့်အချိန်၌သူနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုသူခေါ်ဆောင်လာသောအခါ (လမ်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်) သင်ပြောပြလိမ့်မည်။ သူကသူယူချင်တယ်၊ သူဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြောတယ်။ သူမယောက်ျားမရှိဘူးထင်တယ် သို့သော်ငါရောက်လာသောအခါသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် King Size အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်နေခဲ့သည်။ သူမကသူသည်ငရဲအဖြစ်အရက်မူးရောက်ရှိနေကြောင်းနှင့်သူသည်နေ့လည်ခင်းမတိုင်မီအထိသူမအိပ်မပျော်ကြောင်း၊ ထိုအခြိနျတှငျ၊ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးသူကျွန်တော့်ရဲ့သံသယကိုမြင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်လက်ကိုမလွှတ်ဘဲအိပ်ရာအစွန်းမှာထိုင်ပြီးကျွန်တော့်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးခါးပတ်ကနေခေါ်သွားတယ်၊ သူကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှင်းလင်းဖို့အချိန်မရတဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော့်ငပဲကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော blowjob နဲ့စတင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီခွေးဟာငါလိုချင်သလိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတတ်နိုင်သလောက်သူဆုံးမendedဝါဒပေးခဲ့တဲ့သူ (သူမလိင်၌ကျွန်ုပ်၏ဆရာဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်သည်) ဖြစ်နိုင်သမျှရာထူးများသို့ပြီးအောင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ဘေးထွက်အားဖြင့်ခင်ပွန်းနှင့်အတူ။ ငါကမှန်တယ်ကျိန်ဆို အမျိုးသမီးများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အငြိုးအတေးဆုံးနှင့်အပူဆုံးသတ္တဝါများဖြစ်သည်ကိုယုံမှားသံသယရှိစရာမလိုပါ။ စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်ခြင်းများနှင့်လိင်၊ လူမှုရေး၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာစသည်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာ (လွတ်လပ်စွာဆက်ဆံပိုင်ခွင့်) ပေးသူများသာရှိသည်။ ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်ခြင်းအတွက်တိုတောင်းသော။
ငါသူမကိုချစ်မြတ်နိုးသူအဖြစ် ၇ နှစ်လောက်နေခဲ့ပြီးသူမနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်၊ သူမခင်ပွန်းနဲ့သူရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကသူမနဲ့အတူပျော်ခဲ့တယ်၊ သူမဝတ်ထားတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေရဲ့လိင်မှုကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်။
လူငယ်များ၊ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုအများကြီးကူညီလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်ဇနီးမဟုတ်သူနှင့်အတူနေရလျှင်ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အနည်းဆုံးအနေဖြင့်သူမအမဲလိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်စေထိုမိန်းကလေးကိုချစ်ရန်ဖြစ်သည်။ \_ t
Samantha jones ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထက် ၁၀ နှစ်ငယ်သောချစ်သူနှင့်လက်ထပ်ထားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူနှင့်တွေ့ဆုံသောအခါသူ၏ချိုသော၊ ရှက်တတ်သည့်စရိုက်ကိုကျွန်မနှစ်သက်ခဲ့သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအလွန်ရဲရင့်စွာရဲရင့်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူသာရှေ့ဆက်သွားနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ချော့မော့ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၉ နှစ်နှင့် ၄၀ နှစ်) ဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ရန်၊ အိမ်၊ ခင်ပွန်းသည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါငါနင့်ရဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်သိစိတ်ဟာညတွေများစွာရှိခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ၊ သူကအရမ်းကိုဆက်ကပ်အပ်နှံပြီးလေးစားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်
၀ ိညာဉ်ရေးရာ ၀ ိညာဉ်ရေးရာ (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်နောင်တယူခြင်းအစရှိသည့်အရာများဖြစ်သည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမည်သည့်အနေအထားတွင်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ (က) အိမ်ထောင်သည်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှု၊
(ခ) သူနှင့်အတူရှိနေခြင်း (ငါ့ကိုချစ်သောသတ္တဝါများကိုကျွန်ုပ်မပျော်အောင်ငါသေချာစေမည်။ ) ငါဘာတွေထပ်ပြော ဦး မလဲ ... ..
samantha Jones အားပြန်ပြောပါ
Juan Moreno ဟုသူကပြောသည်
ps ............... ငါကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်လျှင်ထိုနည်းဗျူဟာမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်
juan moreno အားပြန်ပြောပါ
မင်းတို့သူတို့ကိုမင်းမလုပ်စေချင်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့မှာရှိသလောက်ထင်သလောက်မလုံလောက်တာကြောင့်ပိုပြီးလွယ်ကူတယ်လို့ထင်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနှေးနဲ့အမြန်အရာရာတိုင်းကပြန်ဆပ်ပြီးပြန်လာပြီးဖျားနာတာကိုမှတ်မိနေတယ်။ လက်မထပ်ရသေးသောမိန်းမများကိုစဉ်းစားခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးများရှာဖွေခြင်း၊ ပြင်းထန်ခြင်း၊ ခေါင်းမော့ခြင်းမပြုခြင်းတို့ဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုရောယောက်ျားများကပါအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်သည် ..။ သူတို့လက်ထပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းသည်တစ်စုံတစ်ရာအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ခဏကြာတော့မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများကို ဆက်လက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်ကြိုးစားသော်လည်းသူတို့သည်မဝင်ပါ။
ငါ့အတွေ့အကြုံကအဆိုးဆုံးလားဆိုတာငါမသိဘူး။ အသက် ၆၀ ကျော်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုကျွန်မချစ်မြတ်နိုးပြီးကျွန်မယောက်ျားကကျွန်မထက်အသက် ၂၀ ကြီးပါတယ်။ တကယ်တော့အသက် ၆၀ အရွယ်လူတစ်ယောက်ဟာ ၂ နှစ်လောက်အချစ်ကျခဲ့ရပြီးသူ့ကိုငါယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မယောက်ျားသိသွားတဲ့အခါသူကအရာရာတိုင်းအတွက်ကျွန်မကိုအပြစ်တင်ခဲ့တယ်။ နှစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်သူကကျွန်မယောက်ျားကလိမ်နေတယ်ဆိုတာပြောတော့ငါကိုယ်တိုင်ရှာဖို့တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ဒုတိယအခွင့်အရေးအတွက်သူဟာကျွန်တော့်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့တယ်၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်မနှလုံးသားကတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးယုံကြည်ရမလဲဆိုတာကျောက်တုံးလိုပြောင်းသွားတယ်။ အမှန်တရားကတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကငါ့အိမ်ထောင်မှာတစ်ခုခုပျက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်အဆိုးဆုံးကတော့ငါအဲဒီလူကိုမထိုက်တန်ဘဲငါစဉ်းစားနေတုန်းပဲ။ ကျွန်မခင်ပွန်းကကျွန်တော်တို့ကိုအစကန ဦး ကနေစစေချင်တယ်။ ဘုရားသခင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါဟာသူနဲ့သေဖို့တောင်မှလူတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆောင်းပါးနဲ့မတူပါဘူး။
အမည်မသိ2ဟုသူကပြောသည်
ငါတို့နှင့်ဆက်ဆံသောအရာသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ပတ်သက်သည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သမျှသည်မှားသည်ဖြစ်စေမှားသည်၊ သွေးဆောင်မှု၊ ကာလအပိုင်းအခြားအတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
မတ်လ ၁ ရက်နေ့က Jaime ထောက်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအစမှအပအရာများကိုရှင်းလင်းပြတ်သားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သူမျှခိုင်မြဲသောလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုပြိုကွဲစေလိုသည်။ ဒီအပြင်အပြင်မှာ၊ စွန့်စားချင်တဲ့သူကိုစွန့်စားချင်တဲ့သူ၊ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကြီးမားတဲ့အချက်ကတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာဟာအဲဒီထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုလည်းပါ ၀ င်တယ်။
လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကကျွန်တော်စပြောခဲ့သောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ ဆက်လက်၍၊ ကျွန်ုပ်လေးနှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာများသည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအရေးကြီးသည်။
ဒီအချက်ကိုသိပါရစေ။ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပထမဆုံးပြောပြရမယ်၊ သူကဒီမှာ Nacho လို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မယုံနိုင်လောက်တဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာကျွန်တော်ဟာရက်ပေါင်းများစွာစဉ်းစားပြီးမကျေနပ်မှုနဲ့မုန်းတီးမှုကိုပထမဆုံးခံစားမှုကသိချင်စိတ်နဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ သူလိုချင်သောခံစားချက်ကကျွန်ုပ်၏ "အတ္တ" နှင့်အစည်းအဝေး၏ဆန္ဒများကိုများစွာကျွေးမွေးသည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ သူဖုန်းကိုဆက်ထားခဲ့သည်။ ၁၅ ရက်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုဖုန်းနဲ့ဖုန်းခေါ်ပြီးအထင်အမြင်ဖလှယ်ဖို့အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါဖုန်းခေါ်တာကိုဖြေတဲ့အခါသူစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်၊ နောက်ထပ် ado မရှိရင်ငါသူသည်ငါ့မြို့သို့ရောက်လာသောအခါကသူ့ကိုသို့ပြောသည်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီမြို့မှာကျွန်တော့်အစ်ကိုကသူ့ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့နွေရာသီအတွက်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။ ငါအစည်းအဝေးကျင်းပရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြံပေးခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူအားကြီးမားသောအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်မည်သူကမျှတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မသိကြသည့်အတွက်သူ့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရသည်။
Nacho ကသူကသူ့အမေကို ၇ ရက်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ သူရောက်လာရင်ငါ့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
၇ ရက်တိတိအကြာတွင် (နံနက်အချိန်၌) ကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ယောက်ျားသည်နံနက်အချိန်၌အလုပ်လုပ်ပြီး၊
နောက်နေ့မနက် ၁၀ နာရီမှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်၊ သူ့ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာငါစောင့်နေပြီးခေါင်းလောင်းသံမြည်တယ်။
ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာပါပဲ တိုက်ခန်းသည်တည်နေရာအနေအထားအရအသစ်ဖြစ်ပြီးအလွန်သတိပညာရှိသည်။ ပါးပေါ်ကအနမ်းနှစ်ခုနှင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နှုတ်ဆက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ the ည့်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါသူပြောတာကိုကျွန်တော်အရမ်းအံ့သြမိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့ဆန္ဒကိုငါတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပြီးဆန္ဒရှိပြီးကြိုးစားချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးတွေကငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးလိုချင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးလိုချင်တဲ့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါကအဲဒီအချိန်ကတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူးကတည်းကငါကပိုင်ဆိုင်ရန်စပ်စုခဲ့ကြောင်းသူ့ကိုသို့ပြောသည်။ ဒါဟာသူ့ကိုမှပြီးပြည့်စုံသောသလိုပဲနောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲနှင့်သဘာဝကျကျနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာသူသည်ငါ့ညင်ညင်သာသာငါ့လက်ကိုယူ။ သူ၏ယင်ကောင်ပေါ်မှာတင်; ငါ့အသက်ရှူလွန်းတယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမသူမ၏ stroking သူမ၏ခက်ခဲလွန်းမဟုတ်အထုပ်လမ်းပြစတင်ခဲ့သည်။ ငါကမဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ငါသိမ်းသွားတယ်။ ငါဆိုသည်ကားဘောင်းဘီမှတဆင့်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ၏ caress ကိုတှနျးလှနျနိုငျသောမိန်းမမရှိ, လက်ထပ်မဟုတ်သလိုတစ်ကိုယ်ရေ, မုတ်ဆိုးမအဘယ်သူမျှမကပြောသည်။ တစ်ခါတစ်ရံအသံအတိုးအကျယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူသည်စိုက်ထူပြီးအားကောင်းသော phallus ကိုထုတ်ယူလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝအံ့အားသင့်သွားပြီး၊ အလွန်နူးညံ့စွာနှင့်အစပိုင်းတွင်ပွတ်သပ်လာသည်။
Patri အတွက်ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကအကြံဥာဏ်တွေ၊ မိန်းမတစ်ယောက်လည်းကူညီနိုင်တယ်။
ခဏကြာပြီးနောက်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအိပ်ခန်းထဲ၌ရေချိုးခန်းသို့သွားရန်အကြံပြုသည်။ ပေါင်းစပ်ပြီးထွက်ခွာတဲ့အခါအိပ်ရာအစွန်းမှာသူနဲ့လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်ထိုင်နေတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါစာရွက်များအကြားအိပ်သူမအတူတူလုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။ နောက်ထပ် ado မရှိရင်သူကငါ့ရဲ့ဗိုက်နဲ့ရင်သားကိုညင်ညင်သာသာစတင်ဖြည့်တင်းခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် ado သို့မဟုတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲငါသည်ငါ့ဘရာစီယာကိုချွတ်နှင့် panties ၌နေ၏။ ငါဟာကြီးမားပြီးလှပတဲ့ရင်သားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်။ ငါသူတို့ကိုအရမ်းအထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်ညင်ညင်သာသာငါ့ကိုနင်ပေးဖို့တောင်းခဲ့တယ်။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြုမိပါစေ။ သူသည်မိမိ၏လက်ဝှေ့ထိုးဘောင်းဘီတိုများမှတဆင့်သူ၏အစွမ်းအစရှိသည့်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ၏ခံစားချက်ကိုခံစားခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အတော်လေးနှိုးဆွခံရပြီးကျွန်ုပ်၏ယောနိသည်စိုစွတ်လာသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူကငါ့ကိုလည်ပင်းနှင့်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာနမ်းခဲ့သည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့်ထိုနေရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ သူ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကြီးလှ၏။ နောက်ဆုံးတော့သူမသည်သူမ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုချွတ်ပြီးကျွန်ုပ်စိုစွတ်သောယောနိ၏ဝင်ပေါက်တွင်ညင်ညင်သာသာအနားယူပြီး panties ကိုချွတ်လိုက်သည်။ အစပိုင်းတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ရှိုက်ပေါ်တွင်ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းတို့ဖြင့်ပါ ၀ င်သော glans များကိုသာမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူဟာကြီးမားတဲ့ကြက်ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္clearlyာန်ကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်မိနေခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာဘယ်တော့မှချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူကသူ့ကိုကြိမ်ဖန်များစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးသူ့ကိုငါစင်တီမီတာသိတယ်။ စင်တီမီတာသို့။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုးဖောက်နက်ရှိုင်း; အစွမ်းထက်ပြီးအစွမ်းထက်တဲ့အသင်း ၀ င်တစ်ယောက်ကငါ့ကိုညင်ညင်သာသာထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်ုပ်သည်အတွင်းထဲ၌မြှုပ်နှံနေသောသန္ဓေသားလောင်းတစ်ခုလုံးကိုမြှုပ်နှံမိသောအခါကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယအကြိမ်မီးလင်းသွားပြီဟုခံစားခဲ့ရသည်။
အထူးသဖြင့်ရေးထားတာကောင်းတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အကြုံတွေကိုဖတ်ပြီးမျှဝေရတာကောင်းပါတယ်။ Patri အတွက်ကောင်းတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးများရှိသောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်းအသက်တူတူပင်ဖြစ်သည်
သူမသည်သူမအတွက်ကောင်းသောအရာများ၊ များစွာကူညီပေးမှုများကြောင့်သူ့ကိုစွန့်ခွာ။ မရနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်။ သို့သော်သူ၏ဖြစ်တည်မှုပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှသူသည်သူ့ကိုမချစ်တော့ပါ။ အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာသူမတစ်ခါမျှမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူနဲ့အတူအော်ဂဇင်၊ ငါနဲ့သူဟုတ်တယ်ငါသူမကိုမိန်းမလိုခံစားမိစေတယ်၊ ​​သူကငါနဲ့အတူနေချင်တယ်၊
ည carles ဟုသူကပြောသည်
စူပါဆောင်းပါး၊ ရင့်ကျက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားပြောခြင်းတို့သည်အလွန်အဆင့်မြင့်သောနေရာ၌သူတို့သည်အလွန်ဂရုစိုက်တတ်သည့်လူတစ် ဦး အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
aj carles အားပြန်ပြောပါ
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ အစတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်စွာစကားပြောခဲ့သည်။ သို့သော်အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်မလုပ်တော့ပါကသူမကိုယုံကြည်သည်။ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌သူခံစားခဲ့ရသမျှအရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာရန်ကျွန်ုပ်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်။ အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာတည်ရှိပြီးဖြစ်လို့အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေခဲ့ပြီးငါချစ်သူကိုလက်မခံခဲ့ဘူး။ သူမစဉ်းစားနေသမျှကာလပတ်လုံးသူမမှာအလှဆုံးအမည်ရှိသော Cecilia ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဇနီး၏ညီမဖြစ်သောကျွန်တော့်အစ်မယောင်ကိုချစ်မိသွားသည်။ သူမအသက် ၂၀ ရှိပြီး ၁ နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် ၃၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းခဲ့ပြီးပြီ။ သူမနှင့်သူမသည်သူမ၏လက်များကိုပင်အနမ်းပေးသော်လည်းသူမကဟာသအဖြစ်ယူသည်။ အခြားဘာမျှမ၊ နောက်ဆုံးတွင်သူမကိုအိပ်ရာထဲသို့ခေါ်ဆောင်ရန်ငါအဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်းသူ၏ခင်ပွန်းသည်များစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်သူမကိုအလွန်ဂရုမစိုက်ကြောင်းသူသိသည်။ မျက်နှာသာပေးပေမယ့်ဒါဟာမှန်ပါတယ်ငါရယ်မောခဲပေမယ့်ငါသူမ၏ရယ်မောပါစေ
သူတို့သည်ပူနွေးသောကြောင့်အပင်ငယ်များကိုဖြတ်တောက်တော့မည်နှင့်သင်ကမိန်းမများ၊ သူတို့သည်အရှက်တကွဲဖြစ်ရန်သေခြင်းနှင့်သေခြင်းကဲ့သို့သောအရာများအတွက်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အဖော်ကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်သူတို့အဖော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အဖော်ကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလမ်းလျှောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ တောင်စောင်းများနှင့်တောင်စောင်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးပြီး၎င်းကိုမစွန့်ပစ်သောသူများအားဒုက္ခရောက်စေမည်မဟုတ်သော်လည်းသူတို့သည်အလွန်ထင်မြင်ယူဆလျှင်အလွန်ထူးခြားသည်ဟုသူတို့ထင်ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ခန့်ကသူမနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုလေးစားမှုမရှိခြင်း
အဘယျသို့ post, အဘယ်ကြောင့်သင်, အသုံးချကစား, မုသာကိုသုံးသော, ဆိုးရွားလှ, အထင်အမြင်သေး, အပေါ်ယံနှင့်ရှုပ်ထွေးမုသာကိုသုံးရန်ဘယ်လိုထားသလဲ? ဤအပုဒ်သည်မယုံကြည်သူကိုကောင်းစွာပုံဖော်သည်။ သူတို့၏ကွန်ယက်များထဲသို့ကျသွားသူသည်ဗလာ၊ အပြား၊ နုညံ့သော၊ အကန့်အသတ်ရှိသောသူများနှင့်အလွန်ဟန်ဆောင်သူနှင့်အဆိုးမြင်သူဖြစ်သည်။ ဘာတွေဖတ်ရမလဲ ...
Ramon၊ သင်၏ကြက်နှင့်အတူအလွန်တောင့်တင်းသောပုံတစ်ပုံရိုက်။ မင်းကိုခွေးကဲ့သို့လေးကောင်ကိုချစ်လိမ့်မည်၊ သင်ချစ်မိသွားပြီလား၊ ဓာတ်ပုံကိုစာအိတ်တစ်လုံးထဲထည့်ပြီးအနီရောင်ကော်ဇောတစ်ချောင်းနှင့်အတူလူကိုကမ်းလှမ်းပါ။ သူမနားရွက်တွင်နူးညံ့ပျော့ပျောင်း။ ကော်ဖီသို့မဟုတ်နေ့လည်စာစားရန်တောင်းဆိုသည်။ သင်ချက်ချင်းသင်သည်အပြုံးဖြင့်အဝေးသို့ထွက်သွားပြီးအလုပ်မှထွက်သွားသောအခါသင်သည်သင်၏ချိန်းဆိုသည့်နေ့၌သင်သည်သူမကိုအလွန်အရသာရှိကြောင်းသင့်အားအာမခံသည်။ သို့သော်သင်ဖုန်မှုန့်နှင့်ဖုန်မှုန့်အကြားခံနိုင်ရည်ရှိရန်သူမသွားလိမ့်မည် သူမ၏ခင်ပွန်း၏ဘေးတွင်သူမ၏မပျော်ဘဝအကြောင်းကိုလွှတ်ပေးပါ။ ထိုတွင်သင်သည်သတိပြုရန်လိုအပ်ပြီးအမြဲတမ်းသူမ၏အကြောင်းပြချက်ကိုပေးပြီးသူမ၏ cuckold ခင်ပွန်းသည်အပေါ်မကောင်းသောအတွေးအခေါ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်၊ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုအမြဲပေးပြီးအမြဲတမ်းသင်၏အကြံဥာဏ်ကိုပေးသည်; သငျသညျသူမ၏စကားကိုနားထောငျနေစဉ်သင်သူမ၏နောက်တဖန်သူမ၏နားကိုနားထောင်ရန်နှင့်တိတ်တဆိတ်, ကလေးတစ် ဦး ကဲ့သို့သူမ၏အသားအရေနမ်းနေစဉ်, သင်သူမ၏နှင့်အတူအကောင်းခံစားမိကြောင်းသူမ၏မှတိုးတိုးပြောလိုက်သည်, သူမ၏ခင်ပွန်းကသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားသောကြောင့်ကျေးဇူးတင် သူမသူမကိုသင့်ရဲ့လက်မောင်းတွေ၊ နေရာတွေမှာထားနိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုအလုံအလောက်ရှိတယ်။ အဲဒီမှာသူမကသူမသင့်ဘဝအကြောင်းမင်းကိုပြောပြပြီးခေါင်းကိုနွေးပေးလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူနမ်းပြီးသင့်ကြက်ကိုဆူအောင်ကျွေးမွေးပါလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ဘဝမှာသူတို့တစ်ခါမှမတူခဲ့သလိုမင်းကိုမင်းကသူမကိုချစ်စေချင်တယ်။ အခုကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြတ်ပြီးမင်းရဲ့တပ်မက်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ စိတ်ရောဂါကင်းမဲ့စွာသူမကိုစို့စို့ပါစေ။ သင်၏ကြက်ကိုသူမပါးစပ်ထဲထည့်ပြီးသူမကြည့်ရှုနိုင်အောင်သူမမျက်လုံးများတွင်ကြည့်ရှုရန်ပြောပါ ခင်ဗျားဘယ်လောက်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ၊ မင်းကသူမကိုစုတ်ပြတ်နေစေပြီးချိုမြိန်မှုတွေနဲ့နွေးထွေးပျူငှာစွာဆက်ဆံရမယ်၊ နူးညံ့ပြီးရုတ်တရက်ဖြစ်၊ ချစ်ခင်တွယ်တာပြီးသူမကိုခွေးလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစေအောင်၊ ဆံပင်နဲ့သူမနှုတ်ခမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းကနားမကြားတဲ့စကားတွေပြောနေတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ xaval၊ မင်းဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့ရင်ငါရှုပ်ထွေးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကိုမမေ့နဲ့၊ မင်းရရင်မင်းမှာ org ရှိမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ပြtheနာများစတင်လာပါက xaval ကိုတန်ဖိုးထားပါ။ ချောင်းတစ်ချောင်း၏ရှပ်အင်္ကျီထဲမ ၀ င်ပါ။ ထိုမိန်းမနှင့်သင်ဆက်ဆံရသည်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုမမြင်ပါ။ သတိပြုပါ။
ဤသည် Ramon ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတုံ့ပြန်ဖြစ်ပါတယ်
လူးဝစ္စ၊ စိတ်မဆိုးပါနဲ့၊ မင်းမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်တဲ့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းအစလည်းရှိခဲ့တယ်။ မင်းကတိုက်ရိုက်ပဲ၊ အမှန်တရားလည်းမရှိ၊ တိုတို, သီလ၏လူ့ packet ကို; ဒါပေမယ့်ငါကြောက်တယ်၊ မင်းရဲ့ဇနီးကမင်းရဲ့နိုးထမှုနောက်ကိုမလိုက်ဘဲ၊ နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းနှစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးစိတ်ရှည်တဲ့ဖောက်ပြန်သူရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုငါကြောက်တယ်။ တဖန်သင်တို့ cuckolds ၏ဘိုအယူအဆကနေနှိုး။
Luisito မကြာခင်ကုန်တော့မယ်ဆိုတာစိတ်အေးအေးထားပါ။ တစ်နေ့မှာ Babia မှာသင်ဟာ postin မယုံကြည်ဘူးလားဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဘယ်သူသိမှာလဲ။ သူတို့ကိုလာတာ၊ စိတ်အေးအေးထား၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စိတ်အေးအေးထားနိုင်တာကိုမြင်ဖို့၊ တစ်ခုခု ရှိ၍ ပြုံးပါ။ ဦး ခေါင်းခွံအနည်းငယ်ရှိပါ။
ခင်ဗျားတို့အများစုဟာဒီ post ရဲ့အနှစ်သာရကနေဝေးရာကိုထွက်ခွာသွားနေကြပြီ။ ဒီမှာအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုသွေးဆောင်ဖြုန်းတီးရမယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြproblemsနာတွေကိုနက်နက်နဲနဲမဖော်ပြဘူး၊ ဒီ post ကိုဒီမေးခွန်းအတွက်ကန့်သတ်ထားရမယ်။ ငါတို့အကျိုးကျေးဇူးအချို့ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏နည်းဗျူဟာများကိုတိုးတက်အောင်ပြောပြခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုသံသယဝင်ခြင်းများကိုမည်သို့ကူညီမည်၊ သို့မဟုတ်ပထမခြေလှမ်းကိုလှမ်းခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်ဆိုင်သောအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၊ သူတို့လိုလူတွေအတွက်မရေမတွက်နိုင်တဲ့ပို့စ်များရှိတယ်
ငါဤကောင်းသောအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးချမည်။ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုသဘောကျသည်။ သို့သော်သူမကကျွန်ုပ်အားဘာမှမပြောပါ။
ငါအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ပတ်သက်ပြီးရူးသည်။ သူမခွဲနေခဲ့သော်လည်းယခုစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်သူမခင်ပွန်းနှင့်အတူပြန်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ငွေမရှိလျှင်မည်သို့ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်နည်း။ သင်အကြံပေးနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားပါသည်။
luiseအားပြန်ကြားပါ
အရာခပ်သိမ်းကြားမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တစ်နေ့တာပတ်လုံးအနားယူခြင်းသည်အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အားငါတို့ကိုကြိုက်ကြောင်းပြောရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပြီးထိုအခြေအနေသည်မည်သူ့ကိုမျှဒေါသမထွက်စေနိုင်ပါ။ "မင်းကိုငါဘာကိုနှစ်သက်သလဲဆိုတာနဲ့ ... !" စတိုင်လ်ရှိရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှတ်ချက်တစ်ခု။ လူသိရှင်ကြားလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်၊ သူမမှာကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုသိဖို့သူ့ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ရုံစောင့်ကြည့်နှင့်၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထို အချိန်မှစ၍ ခင်မင်ရင်းနှီးရန်၊ ပြုံးရန်၊ ပြုံးရန်စသည်စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းဤဖိုရမ်ကိုအခါအားလျော်စွာကြည့်ရှုပြီးအောင်နိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသားများ၏လှည့်ကွက်များနှင့်မဟာဗျူဟာများကိုလေ့လာလိုပါသည်။
အမှန်တရားကတော့သင်တစ်မိုင်အကွာအဝေးတစ်နေရာမှထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်ပြောပြမည့်အတွေ့အကြုံသည်ရာမွန်ထောက်ပြသောအရာနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အချက်ပြရန်လိုသည်၊ သိမ်မွေ့သောနည်းဖြင့်သတိထားရမည်။
အကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံနှစ်ခုထက်ပို။ ပြန်သွားသည်။ မှတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုသူတိုင်းသည် Patri မှကျွန်ုပ်၏ nik ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်ကျပြီးပွင့်လင်းသောစိတ်ထားရှိသည် (ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာ) ။
ငါကအဝတ်အစားတွေအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ကောင်းကောင်းဝတ်စားဆင်ယင်တယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုကြော့ရှင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်။
အများအားဖြင့်အဝတ်အထည်များ ၀ ယ်ရန်အတွက်ကျော်ကြားသောစျေးဝယ်ရုံသို့သွားလေ့ရှိသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်မန်နေဂျာများသည်ငါ့ကိုသိပြီးသားဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မည်သူ့ကိုမျှမသိကျွမ်းပါ။
တစ်ကြိမ်တွင်စက်ရုံမန်နေဂျာ (အစဉ်မပြတ်အင်္ကျီဝတ်စုံနှင့်တော်တော်လေးချောမောလှပပြီးသတ္တိနည်းပြီးသတ္တုတွင်းထက်ငယ်သည်) ကျွန်ုပ်သည်အထည်အလိပ်၏အရည်အသွေးကိုအကြောင်းကြားရန်ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်ကိုလာရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းသည်ယခုအချိန်တွင်ဂရုမစိုက်သော်လည်းလက်ရှိတွင်ရှိနေခဲ့သည် သူကကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကိုင်ထားသောအဝတ်၏အရည်အသွေးကိုပြသသောအခါသူကကျွန်မလက်ကိုဆွဲကိုင်ပြီးညင်ညင်သာသာနှိပ်လိုက်သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုတစ်ပိုင်းခွဲထားလိုက်သည်။ သူသတိလစ်မေ့မျောနေသောကြောင့်သူမည်သို့တုန်လှုပ်သွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်မခင်ပွန်းအားမပြောခဲ့ပါ မလိုအပ်သောပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်။
ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မှန်ကန်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကုန်တိုက်သို့သွားတိုင်းငါစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးရှေ့သို့ထွက်သွားသည်ကိုအမြဲသတိပြုမိခဲ့သည် သူကကျွန်တော့်ကိုအမြဲသတိရှိရှိနှုတ်ဆက်ပြီးငါမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ ဒီလိုမျိုးတစ်နှစ်ကျော်ကြာတာ ...
မင်္ဂလာပါ Patri၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ပုံပြင်များကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင်ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်သင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်စိတ် ၀ င်စားကြောင်းနှင့်၎င်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ ငါတို့အချင်းချင်းစကားမပြောနိုင်တဲ့အခြားအရာတွေ။ ငါတို့စကားပြောနေတုန်းမျက်လုံးတွေဟာအပျက်သဘောဆောင်ရင်တောင်သင့်ဘက်မှအဖြေကိုစောင့်နေတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သုံးလမ်းဆက်နွယ်မှုရှိသည် (ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်း၊ ရည်းစားဟောင်းနှင့်စျေးဝယ်စင်တာ၏စက်ရုံမန်နေဂျာကိုဤနေရာတွင်“ Juan” ဟုခေါ်ဆိုမည်) ရှိသည်ဆိုပါစို့။ အမှန်တရားမှာသူပြသခဲ့သည့်သည်းခံခြင်းနှင့်သမ္မာသတိသည်ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်ပြီးငါ့အတ္တကိုတွန်းအားပေးခဲ့သည်။ အချိန်ဖွင့်ပြီးမကြာမီတစ်မနက်မှာငါကုန်တိုက်သို့သွားခဲ့သည်။ သူသည်စက်ရုံတစ်ဝိုက်သို့မဟုတ်ရုံးareaရိယာတွင်အမြဲကြီးကြပ်နေခဲ့သည်။ အဝတ်အစားတွေကိုအာရုံထွေပြားစွာကြည့်နေတယ်။ ခဏအကြာမှာသူ့ကိုအမြဲတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဖြင့်သူကသူ၏အာရုံကိုပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမထိုအချိန်ကသူမ၏လက်၌တစ် ဦး စားဆင်ယင်ခဲ့ဖုံးကွယ်ရန်။ သူချဉ်းကပ်လာတဲ့အခါငါသူ့ကိုတိုက်ရိုက်ပြောခဲ့တယ်။ "ဟွမ် Juan၊ ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ခဲ့တာကြာပြီ၊ မင်းငါ့ကိုတွေ့ချင်တာငါလည်းတွေ့တယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးလျောက်ပတ်တဲ့အခန်းထဲသွားပြီးငါ့ကိုစောင့်ပါ၊ ငါခဏပြန်လာလိမ့်မယ်။ " ငါ့စကား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့မျက်လုံးတွေကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသူ့ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုတိုးပွားလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတိပြုမိသည်။ သူက "အိုကေ၊ ငါသွားမယ်၊ ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှဝင်မလာဘူး"
အမှန်စင်စစ်ငါနံနက်ယံ၌ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖောက်သည်အနည်းငယ်သာဖြစ်ကြောင်းနှင့်အလုပ်သမားများအဝတ်အစားစီနေကြသည်။ သူ့ကိုငါလျောက်ပတ်သောအခန်းထဲဝင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ငါဖြည်းဖြည်းချင်းအခြားစားဆင်ယင်ယူ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအခန်းကိုသွား၏။ ပြောင်းလဲနေတဲ့အခန်းငါးခန်းရှိတယ်။ လည်ချောင်းကိုတိတ်တိတ်လေးဖွင့်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတံခါးကိုငါကြည့်လိုက်တော့ငါ ၀ င်လာတာကိုမစဉ်းစားဘဲ ၀ တ်စုံတိုင်ပေါ်မှာဆင်မြန်းနေတယ်။ သူကတံခါးကျင်ကိုပိတ်လိုက်အဖြစ်သူ့ကို။ နောက်ထပ် ado မရှိဘဲဘာမှမပြောဘဲ, ငါသည်သူ၏ဘောင်းဘီမှတဆင့်သူ၏အသင်းနှိုက်စတင် ...
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိသော်လည်း ၅ ရက်ခန့်ကြာခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာသူမသည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပြီးအသက် ၁၆ နှစ်သာသည်။ ငါအမှန်
သင်တို့အထဲမှအချို့သည်မိန်းမသုံး ဦး ကြားဆက်ဆံရေးကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးမျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကိုသင်အချို့အံ့အားသင့်သွားနိုင်သည်။ အဆိုပါရှင်းပြချက်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာလိင်မှခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယောက်ျားနှင့်လိင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခွဲထုတ်ခြင်းဟူသောဤသင်ကြားမှုကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်သည်လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ဘဲဆက်ဆံမှုတွင်ရှင်းလင်းရမည်။ ငါ့ကိစ္စအတွက်ငါဘာမှမရှာဘဲငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မခင်ပွန်းကိုချစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးမနာလိုမဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်ကျွန်မတို့ကလိင်ကောင်းကောင်းရပေမယ့်ကျွန်မကိုမပြီးသေးပါဘူး။ ငါကအခြားနှစ် ဦး နှင့်အတူရှိကြိုကြားကြိုကြားဆက်ဆံရေးပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြည့်အဖြစ်အစေခံ။ သဘောမတူသူများစွာရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်ရည်ရွယ်ချက်များရှိခြင်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းတို့သည်အရာရာသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုငါသေချာသည်။ သတိပြုလော့။ သမ္မာသတိသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးသတိကြီးစွာ ထား၍ ဤအန္တရာယ်၏ကြီးမားသောအန္တရာယ်ကိုသတိပြုပါ၊ ငါမီးနှင့်ကစားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရဲရင့်ပြီးသွေးအေးသောလူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့မှာငါဟာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆက်ပြီးဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါအမှန်တရားမှာဆက်ဆံရေးရှိဖို့ဆိုတာမတွေ့ပါဘူး။ ခင်ဗျားကခင်ဗျားရဲ့ခင်ပွန်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာကရဲရင့်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ငါဟာတစ်ကိုယ်ရေနေစဉ် ... ကောင်းသောချီလီ၌ငါ webeo အတွက်အလွန်ကောင်းတယ်။ အခြားသူနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည့်အရာများရှိသော်လည်းအမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။ သို့သော်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည်ငါဘယ်သောအခါမှသစ္စာမဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူတစ် ဦး နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါကအခြားသူတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အမှတ်အသား ?? ... »အမှန်တရားသည်ကျွန်ုပ်တို့မနာလိုဖြစ်နေခြင်း» ... သင်သေချာလား။ သင်သည်သင်၏ခင်ပွန်း၏နေရာတွင်မဟုတ်သောကြောင့် cuckold ဖြစ်သည့်အတွက်သင်ပြောနိုင်သည်
ခင်ဗျားလိုပဲဒီဆောင်းပါးကိုတုံ့ပြန်သူ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာခင်ဗျားတို့လိုခင်ဗျားယောက်ျားလိုခင်ဗျားဟာအခြားဖက်မှာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာမစဉ်းစားမိကြဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဆောင်းပါးပါအချက်အလက်များကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ရန်ကြိုးစားသောယောက်ျားများထံမှမှတ်ချက်များစွာကိုဖတ်ပြီးနောက်၊ "လက်ထပ်ပြီးသောမိန်းမကိုအိပ်ရာပေါ်သို့တင်ရန်" သို့မဟုတ် "ထိုမြည်းမလေးကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေရန်" သို့မဟုတ်သူတို့လိုချင်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုသာအသုံးပြုလိုခြင်းကမိန်းမငယ်ကိုစားရန်ဖြစ်သည်။ ငါရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ဒေါသထွက်မိသည်၊ အမှိုက်သရိုက်များရှိနေသည်။ အခြားသူတစ် ဦး ၏ခံစားချက်များကိုသူတပါးကမအပြစ်မတင်ဘဲသူတစ်ပါး၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုကြောင့်ရင့်ကျက်မှုကြောင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသည့်အချက်ကိုမဖော်ပြသောယောက်ျားတစ်ယောက်၏အကြောင်း အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီးသူမအားပျော်ရွှင်မှုရရှိစေရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ထိုက်သင့်သည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ချစ်ခင်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပေးသောအခြားယောက်ျားများအပေါ်မကောင်းသောစွဲမှတ်ခြင်း။
ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်အနေဖြင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မပြုပါနှင့်၊ မည်သူမျှပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်သူနှင့်သူမချစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လမ်း၊ လူတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်ခြင်းသည်သင်စာရွက်ပေါ်တွင်လက်မှတ်ထိုးသည့်အခါသို့မဟုတ်ကလေးရှိသည့်အချိန်တွင်အဆုံးသတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အသက်ရှူခြင်းသို့မဟုတ်အစာစားခြင်းကဲ့သို့စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချစ်သူနှစ် ဦး အနေဖြင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပေးနိုင်ပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအမှန်တကယ်ထူးခြားသည့်အရာမှာသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏သီးသန့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့က၎င်းတို့ကိုဂရုမစိုက်ခြင်းနှင့်လေးစားခြင်းမပြုနိုင်ပါက ... သူတို့သည်မထိုက်တန်ပါ။ ဆက်ဆံရေးရှိ
Patri, မင်းရဲ့ "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါတကယ်တော့ဆက်ဆံရေးရှိဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုမမြင်မိပါဘူး၊ ခင်ဗျားကခင်ဗျားရဲ့ခင်ပွန်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာကိုရဲရဲရင့်ရင့်တွေ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဟာတစ်ကိုယ်ရေနေစဉ် ... ကောင်းသောချီလီမှာကျွန်တော်ဟာ webeo အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်၊ အခြားသူနဲ့အရာရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိဖို့အမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း ... ဒါပေမယ့်ဆက်ဆံရေးရှိရင်ငါဘယ်တော့မှသစ္စာမရှိခဲ့ဘူး ... ဘာလဲ အကယ်၍ သင်သည်အခြားသူများနှင့်ဆက်လက်ပေါင်းသင်းနေမည်ဆိုလျှင်အခြားသူနှင့်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အချက်သည် ... ? »အမှန်တရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမနာလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ » ... သင်သေချာလား။ သင်သည်သင်၏ခင်ပွန်း၏နေရာတွင်မဟုတ်သောကြောင့် cuckold ဖြစ်သည့်အတွက်သင်ပြောနိုင်သည်
ပထမတစ်နာရီဖြစ်တာကြောင့်သင့်တော်တဲ့အခန်းကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်၊ သူကသူ့အဖွဲ့ဝင်ဘောင်းဘီကိုဖြတ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲငါတို့နမ်းကြတယ်။ ရုတ်တရက်စကားလုံးမပြောဘဲခါးကနေခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့အဝတ်အစားတွေထိန်သိမ်းအပေါ်ထားတော်မူ၏။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေထဲမှာတောင်မှပိုပြီးအင်အားကြီးမားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကိုငါမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဆိုပါစိုက်ထူ၏မာကျော (ငါ့အဘို့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး) အတွက်သူ၌ထင်ရှား, ဒါကြောင့်လည်းဒီကဗျာအထူရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင်ငါညင်ညင်သာသာဆှဲနှင့်ဖြီးကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကို caress မှစတင်ခဲ့ပြီး - clitoris, အပြင်ဘက်နှုတ်ခမ်း ... ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှသူသည်ငါ့ကိုတင်ပါးနားမှာငါ့ကိုကိုင်။ ငါပြောတာကငါတို့ဟာတူညီတဲ့အမြင့် (ဒေါက်ငါနည်းနည်းပိုကြီးတယ်) နဲ့အတူတူပါပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်္ဂါကိုအနည်းငယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့စတင်ထည့်သွင်းတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးဂလန်းတွေ၊ နည်းနည်းထပ်တိုးတယ်။ ငါ့လက်ယာလက်နဲ့ထိုးဖောက်ခြင်းကိုငါကိုင်ပြီးညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ ခဏအကြာတွင်ချောဆီနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်လက်ကိုနုတ်ယူပြီးကျွန်ုပ်လုံးလုံးနှက်တိုင်တင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လျောက်ပတ်သောအခန်း၏အလယ်တွင်ရှိနေဆဲ, ငါအတွင်းရှိအစွမ်းထက် Phallus ၏ရိုက်နှက်မှုခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့ကပိုအားကောင်းတဲ့ piston လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့ပြီးခရီးရှည်။ ငါ balano ၏အလွန်အခြေစိုက်စခန်းမှ skewered ခံရကိုချစ်၏။ ပထမဆုံးအကြိမ်သူအော်ဂဇင်ကိုမရရှိနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်မိသောကြောင့်အပြင်ဘက်တွင်သုတ်ရည်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကြီးလွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှုပ်ရှားမှုများကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသောကြောင့်အမှန်တရားမှာခြေလှမ်းမလှမ်းနိုင်ပါ။ ရုတ်တရက်သူကအဖွဲ့ဝင်ကိုထုတ်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာချွတ် jerked ။ ငါကြည့်ရှုစိတ်ဝင်စားသည်, သုတ်ရည်၏ဂျက်လေယာဉ်သုံးခုထွက်လာငါ့ခြေရင်းမှာလဲကျပုံကို။ ဘာမှမှတ်ချက်ပေးစရာမလိုဘဲကျွန်တော်တို့ ၀ တ်စားဆင်ယင်ခဲ့ပြီးဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့အခန်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် ဦး တည်ချက်ကသူထွက်လာပြီး“ အခုငါပြန်လာမယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူကသုတ်ရည်ကိုကောက်ယူသည့်အထည်ဖြင့်သူပြန်လာ၏။ ငါလက်၌ဆင်မြန်းနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးထွက်သွားလေ၏။ ကျွန်တော်ထွက်သွားသည်။ ငါအနိုင်ရခဲ့ပထမ ဦး ဆုံးပတ်ပတ်လည်။
ငါမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူမှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်၊ သူကပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့အခန်းကဏ္AVမှာရှိသလောက်မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကကရီရိုကကျွန်တော့်ဘဝကိုကက်ရရွန်၊ , ။ , ။ , ။
သင်၏မှတ်ချက်များကိုငါသာဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့သည့်အမှန်တရား .... ပြီးတော့ဒါကငါ့ကိုပေးတဲ့အသိအကျွမ်းငါ့ကိုမသိသေးတဲ့အိတ်ဆောင်အမြောက်အများ ... မိန်းမတစ်ယောက်လက်ထပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ... ဘယ်သူ့မှမဆို ... သူမလက်ထဲမှမည်သူမျှမယူရဘူး ... သူသည်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ကျိန်ဆိုသည်။ ... သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအောင်နိုင်ရန်ကြိုးစားမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ရွှေပညတ်များကိုကျွန်ုပ်ခေါ်ဝေါ်သောအရာ ... လက်ထပ်ထိမ်းမြားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဘယ်တော့မျှမကြည့်ပါနှင့်။ အလွန်ကြီးမားသောအကွာအဝေးများကိုဆက်လက်ထားရန်ကြိုးစားပါ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်အန္တရာယ်ရှိသည့်အခြေအနေ။ ဖိစီးမှုခံရသည်။ သူသည်လူသတ်သမားသို့သွားသောစကားလုံးများ ... စကားလုံးများသေဆုံးသွားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်တစ်ခုသာ ... သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဘဝအသက်တာ၌အရေးကြီးသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ ငါကဝန်ခံသည်။ ငါကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။
အမျိုးသမီး ၉၀ ရာနှုန်းသည်သစ္စာမဲ့သူများဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဘယ်သောအခါမျှချစ်ခြင်းမေတ္တာမခံစားရပါ။ ယောက်ျားသည်မိမိကိုယ်ကိုလုံးဝပေးသည်နှင့်သူတို့လိုချင်သောအရာကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရအမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏နောက်ကွယ်တွင် guevara ဖြစ်လာသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သည်မယုံကြည်ကြပါ။ သူတို့တွေဟာကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုပိုများလေပိုသစ္စာမဲ့လေ၊ ငါဟာအသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီ။ ငါအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး ၃၀ ကျော်ကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်၊ ငါသူတို့ရှာနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါရုပ်ဆိုးတယ်ငါမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါမလုံးဝမငြူစူဘူး၊ ဒါ့အပြင်ငါကသူမကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောပေမယ့်အဟောင်းမှာပြောထားတာက တိုင်းတာခြင်းခံရလိမ့်မည် ... ..nuynca သူတို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြပါ၊ သူတို့ကိုသာကြင်နာပါ၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းရန်၊ သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့သူ၊ ကြွယ်ဝစေရန်နှင့်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှဖယ်ရှား။ ဘယ်တော့မျှခွင့်မပြုပါနှင့် တစ်လမ်းသွား။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်၊ အောင်မြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်
သူတို့၏အကြံဥာဏ်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေသူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်သူနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်နှင့်အတူတူပင်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပက်ထရိကိုအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်သည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုအမြဲလှည့်ဖြားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ပြီးကတည်းကငါသူမကိုလျစ်လျူရှုပြီးသူမကငါနဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အခါတစ်နေ့မှာသူမကိုသတိထားမိလာပြီးသူ့ကိုလှည့်ဖြားခဲ့တယ်။ သူမမလိုချင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် သူမမှာကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိပြီးသားဖြစ်လို့သူမကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောပေမယ့်သူနဲ့သူမဆက်ဆံခဲ့တာကိုအံ့အားသင့်မိပါတယ်။ တကယ်တော့သူမနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းသူမကသူမလိုချင်တာကကလေးရှိဖို့ဖြစ်တယ်၊ သူမငါ့ကိုရှာတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သူမမိခင်ကြင်ဖော်တစ် ဦး အဖြစ်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်သူမလိုချင်သည်။ တဖန်သူမလိုချင်ကြောင်း၊ သူသည်ငါရွေးချယ်ထားသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်လို့ပါ။ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကငါ့ကိုဆွဲဆောင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလုပ်ရမှန်းသိတာပဲ။ ဒါပေမယ့်သူမနဲ့ဘာမှမလိုချင်ဘူး။ သူမကသူမဆီကိုသူပြောတာတွေကိုသူဘာပြောသလဲဆိုတာမသိဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သူမခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါ့ကိုရူးသွပ်စေလို့ပါ။
jermu ၏ဂရုစိုက်ရန် haha ​​!!!
menud @ s နာမကျန်းခြင်း၊ သစ္စာမဲ့ခြင်းနှင့်သစ္စာဖောက်ခြင်းသည်လူသား၏အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။
ငါ့မှာဇနီးမရှိဘူး၊ ငါ့ကလေးတွေနဲ့အတူနေတယ်။ (၃) သူကငါ့ကိုအများကြီးကူညီတယ်၊ ငါဝန်ခံတယ်; ဒါပေမယ့်ငါရေလောင်းတာနဲ့ဝေးလံစွာပို့ပေးမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ငါထင်သည်အဘယ်သို့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောပြရန်မသိရပါဘူး။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်ငါ့ကိုအကြံပေးသူတစ်စုံတစ် ဦး ။
Giancarlo Bautista ဟုသူကပြောသည်
လက်ထပ်ပြီးသောအမျိုးသမီးကိုအောင်နိုင်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလွယ်ဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်သူမ၏ဇာတ်ကောင်ကိုပြသခြင်း၊ အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး က၎င်းကိုဖတ်လျှင်၎င်းသည်၎င်းတို့သည်အလွန်တန်ဖိုးထားသည့်အရာဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့အစည်းအဝေးတစ်ခုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများအဖွဲ့သို့လာလျှင်ယူပါလိမ့်မည်။ သူမသည်သူမမည်မျှကောင်းမွန်သည်ကိုပြသရန်ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ သင်သည်မည်သည့်အမျိုးသမီးမျှထိုအရာကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင်စိတ်မ ၀ င်စားသကဲ့သို့သူမကိုချဉ်းကပ်ပါ၊ သို့သော်ပြapproachနာများကိုချဉ်း ကပ်၍ ပြောဆိုပြီးအကြံဥာဏ်များပေးလေ့ရှိသည်။ သူမနင့်ကိုကြည့်နေတယ်လို့မင်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်။
ငါသုံးယောက်ရှိပြီ။ ကလေးတွေနဲ့အတူသွားမယ် ... ဒါပေမယ့်မလိုချင်ဘူး ... ဒါကိုငါဝန်ခံတယ်၊ ငါမသိဘူးတစ်ခုတည်းသောကသူတို့ယောက်ျားတွေဖြစ်လိမ့်မယ် ... သူတို့လည်းအတူတူပဲလုပ်ကြလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုလား
Giancarlo Bautista အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိသောအခြေအနေတွင်ရှိနေပါသည်။ သင်ဘာအကြံပြုလိုပါသလဲ။ ကလေးနှစ်ယောက်ရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး၊ သူမ၌ခင်ပွန်းကောင်းရှိပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်၏ယောက္ခမဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ထိုမိန်းမကိုအလွန်နှစ်သက်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သူမငါ့ကိုသဘောကျလားမသိရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာအတူတူနေတဲ့အိမ်မှာအတူတူနေခဲ့ဖူးတယ်၊ သူမနဲ့အတူရှိချင်တယ်ဆိုရင်သူမနဲ့သူမနဲ့အတူရှိချင်ပါတယ်ငါလည်းသူနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့သတိထားမိတဲ့လက္ခဏာအချို့ကိုငါကြည့်ပြီးပြီ။ သူမ၏ယောက်ျားသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူမကကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုလျစ်လျူရှုထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်
ကောင်းပြီ, ငါဟာအထက်ဖော်ပြပါသူအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြissuesနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်ကြိုးစားပြီးထို မှနေ၍ သင်၏ဖြစ်နိုင်ချေများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မင်းမှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရင်ဖြည်းဖြည်းသွားဖို့နဲ့နောက်ဆုံးမှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင်ပြBနာတစ်ခုရှိသည်။ မုန့်ကိုလိုချင်သော်လည်း BUTTER မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သနည်း။
ကျေးဇူးပြု။ ဖြေပါ !!
ပြtheနာအရငါမှာအခြေအနေရှိတယ်၊ ငါဟာအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူမအသက် ၃၅ နှစ်ရှိပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဒီထက်နည်းပေမယ့်ငါကအသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီးသူမမှာကလေးငယ် ၂ ယောက်လည်းရှိတယ်။ .. သူမငါအနည်းငယ်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမယ့်သူမမှာအလွန်လှပသောမျက်နှာရှိသည်, ယခုအချိန်အထိငါဘာလုပ်ရမှန်းတောင်မှနှစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအန္တရာယ်များကိုယူပြီးရှိမရှိ, ငါရှိသည် မျက်လုံးချင်းဆုံမိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သူမကို ပို၍ ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်အရှားမမြင်နိုင်ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါ့အကြည့်ကိုလွှဲလိုက်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံသူမသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်နီးချင်းတစ် ဦး အနေဖြင့်သူမမြင်သည် သူမအိမ်မှထွက်ခွာပြီးအပြင်ဘက်သို့ထွက်သွားပါကကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌သူသည်သူမကျွန်ုပ်အားသူကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသဘောပေါက်လာပြီးငါ့ကိုရယ်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကိုရယ်မောသွားတော့မည်ဟုစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ။
သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူမကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းအရိပ်အယောင်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်အပြင်တွင်ရှိနေပြီးသူမအိမ်မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ အမှန်တရားမှာနောက်ပိုင်းတွင်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဂွမ်းဂို၊ flip flops နှင့်အလွန်ပါးလွှာသောဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်သူမဆံပင်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေသောအလွန်ရယ်စရာကောင်းသည်။ သူမထွက်လာသည်ကိုပြောပြသည်။ သို့သော်သူမထွက်ခွာသွားတော့သည်ဟုပြောပြသော်လည်းသူမသည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုသူမတွေ့ခဲ့ဖူးသောကြောင့် သူမခေါင်းကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီးအစတွင်ကျွန်ုပ်သည်လမ်းလျှောက်ရန်နှင့်ကြည့်ရှုရန် (ကျွန်ုပ်စတိုးဆိုင်သို့သွားသည့်အလားသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခု) သူမကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုသောအခါသူမလှည့်ခြင်းနှင့်သူမအိမ်သို့ရောက်သောအခါငါ သူမတံခါးကိုဖွင့်မကြည့်ခင်သူမသည်ခဏလေးငေးကြည့်လိုက်သည်။ သူမဝင်လာသည်။ သူငယ်ချင်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကပိုက်ဆံမေ့သွားလို့လားဒါမှမဟုတ် aglo ပြန်ပြောလာရင်သူပြန်လာမယ်ဆိုရင်သူပြန်လာရင်သူလည်းမသိဘူး။ ငါအဲဒီအချိန်ကစပြီးရှုပ်ထွေးသွားတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းရှိ၊
ငါပထမ ဦး ဆုံးနေ့ကမှသူမငါ့ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်နှင့်ငါနေဆဲလွန်းကြိုက်သည့်စတိုင်လ်ကိုကြိုက်ကတည်းကငါအလေ့အကျင့်သို့သွင်းထားရန်အလွန်ကောင်းသောအလှူငွေ !! အမှန်တရားသည်ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ထူးဆန်းသောခံစားချက်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ခံစားမိသည်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ အဆုံးမှာသူကငါ့ဆံပင်ကိုဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါသူဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါသူကဆတ်ဆတ်ထိသွားတယ်။ သူမမှာကလေးရှိတယ်။ ငါစနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာထွက်မယ်လို့သူမကိုပြောတော့သူမကသူမထွက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ် !! ဒါပေမယ့်ငါထွက်သွားပြီလို့သူ့ကိုမပြောရဲတဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး !! ငါသူမကိုငါ့ရဲ့စတိုင်လ်သူမဟုတ်ဘဲသူငယ်ချင်းလိုမဟုတ်ဘဲသူမကိုသာမြင်ရင်ငါမသိဘူး !! ငါအကြံဥာဏ်များလိုအပ်ပါတယ် !!!
lilianita aunk သင်အိမ်ထောင်ပြုသည်။ မင်းကိုငါချစ်တယ်၊ ငါတို့အတူတူနေနိုင်အောင်ငါကြိုးစားသမျှကိုငါလုပ်မယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ မလုံလောက်ရင်မင်းကိုငါစောင့်နေမယ်ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူး။ ငါနင့်ကိုချစ်တယ်
လျှို့ဝှက်သောသူတို့၊ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကမ္ဘာ ဦး မှစ၍ ယခုတိုင်အောင်မစရမည်အကြောင်း၊ ယောက်ျားသည်တစ်ယောက်တည်းမနေကောင်း၊ သူသည်မိန်းမဘို့ဖန်ဆင်းသောကြောင့်ယောက်ျားသည်မတရားသောမေထုန်ကို ပြု၍၊ မိဘကိုစွန့ ်၍ ကိုယ်ခင်ပွန်း၌မှီဝဲသဖြင့်၊
EL ILUMINADO ကိုတုံ့ပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်သည်ငယ်ရွယ်သောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်အခြား ၂ ယောက်နှင့်အခြားနှစ် ဦး တို့သည်လက်ထပ်ထားကြပြီးဤဆောင်းပါးသည်သင့်အားအကြံဥာဏ်များပေးရုံသာမကအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်ရန်သို့မဟုတ်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်အတွက်လမ်းညွှန်ချက်မှာသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အမြဲတမ်းရိုးသားရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သူတို့မှာဘယ်တော့မှပြproblemsနာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြားတာကိုအစကတည်းကပြောခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးသိတယ်။ ငါနဲ့အတူ ၁၂ နှစ်တာကာလအတွင်းရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အခမ်းအနားသုံးခုမှာဇနီးကတခြားသူတွေနဲ့တခြားသူတွေအကြောင်းကိုမသိဘူး ဒီထက်ပိုပြီးမသိရပါဘူးဇနီးကငါဘာလုပ်ရမလဲမသိပေမယ့်သူတို့ကိုငါချစ်တယ်။ သူတို့အားလုံးလက်ထပ်ထားကြပေမဲ့ငါတို့အားလုံးဟာအမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရာအားလုံးကိုကူညီနေတယ်၊ ​​ငါတို့အတူတကွကောင်းနေတယ်ဆိုတာမသိဘဲအဲဒါကငါ့ရဲ့အချက်ပဲ။ ငါ့ပုံပြင်နည်းနည်း
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရမှတ်ချက်များအားလုံး၊ အချို့သောအကောင်းနှင့်ဆိုးသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အလွန်စိတ်ပါ ၀ င်စားကြွယ်ဝသော်လည်း၎င်းသည်လူအများနှင့်မဆက်ဆံသင့်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ယူဆသည်။ Patri ကသူပြောတာကသူမဟာ curmudgeon ဒါမှမဟုတ် whore တစ်ခုလုပ်တယ်။ သူမပြောတာကလိင်ဝတ္ထုနဲ့ဆင်တူတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရိုက်ကူးဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့နောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်သားဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်မှားကြောင်းသိသော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်မတင်ပါ၊ ဤသက်သေခံချက်ကိုနားမထောင်ပါနှင့်၊ မယားများနှင့်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိမ်လည်ခြင်းမပြုပါ။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောသာမန်အသိသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ဆုတောင်းပေးပါ။ ဘုရားသခင်သည်ငါ၏မစင်ကြယ်သောအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုသည်းခံတော်မူမည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆုတောင်းခြင်းကမင်းကိုစဉ်းစားရန်စာလုံးပေါင်း! ဤဝါကျကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပြီးသင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမရှိဘဲသင်ပြောသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တောင်းသောအရာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်များကိုသာရရှိလိမ့်မည်။ သင်နှင့်အတူရှိလိုသူကိုစဉ်းစားပြီးသူတို့၏နာမည်ကိုသင့်အား ၃ ကြိမ်ပြောပြပါ။ လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းမှာဒီလူနဲ့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးသင့်အတွက် (၆) ကြိမ်ပြန်လုပ်ပါ။ ယခုထိုသူနှင့်သင်လိုချင်တာကိုစဉ်းစားပြီးတစ်ကြိမ်ပြောပါ။ ယခုပြောပါ .. အလင်းရောင်၏ရောင်ခြည်တော်သည်ကျွန်ုပ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ မည်သူရှိနေသည်၊ မည်သူနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုတူး။ ယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်နောင်တရစေခြင်းငှါတောင်းပန်ပါ၏။ ငါ့နာမည် - ငါ့နာမည်လာခြင်းမှတားဆီးနေသောအရာအားလုံးကိုတူးပါ။ ငါတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကူညီပေးတဲ့သူအားလုံးကိုဖယ်ထားပါ၊ ပြီးတော့သူကကျွန်မကိုစဉ်းစားရုံတင်မကဘဲအခြားအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းသူမမစဉ်းစားကြောင်း၊ သူကကျွန်မကိုခေါ်ပြီးငါ့ကိုချစ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့စွမ်းအားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တောင်းသမျှကိုအမြဲပြည့်စုံစေတယ် ထို့နောက်ဝါကျသုံးကြိမ်၊ ဆိုဒ် ၃ ခုတွင်တင်ရမည်။
ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းကွဲ၏ဇနီးသည်ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းကွဲအားဘာမှမပြောဘဲအိပ်ရာသို့မည်သို့ခေါ်သွားနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီမှာသူမအိမ်နီးချင်းဖြစ်သည်။ သူ၌ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းရှိသည်။ စာရွက်တစ်ရွက်ကိုသူမကစက္ကူအပိုင်းအစတစ်ခုကိုလက်ခံလျှင်သူမကကျွန်ုပ်အားမဖြေပါကသူမကိုပြောပြရန်စက္ကူအနည်းငယ်ပို့လိုက်သည်။ နှင့်ပုံသူမအမျက်ထွက်ခြင်းမပြုခဲ့
brayan muriel ဟုသူကပြောသည်
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဆွဲဆောင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအကနဲ့ပါ
လိင်စိတ်နိုးထစေခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့ကိုနှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊ ဤနည်းဖြင့်သူသည် ပို၍ စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်။
brayan muriel အားပြန်ပြောပါ
Vdj Vinnie ပါ ဟုသူကပြောသည်
Vdj Vinnie အားပြန်ပြောပါ
Zamuel Nuñes ဟုသူကပြောသည်
ငါလက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူချစ်ကြိုက်ငါမေ့လျော့လို့မရပါဘူး။
ဟဟားဟား ဤဆောင်းပါးအမျိုးအစားများကိုဖတ်ခြင်းသည်ကောင်းသည်၊ profiteers များရှေ့တွင်အမျိုးသမီးများဘာမှတ်ချက်မပေးသင့်သည်ကိုသိရန်ကောင်းသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အဖိုးထိုက်သော၊ လှပသောလူသားများဖြစ်ကြပြီးမည်သူမျှကျွန်ုပ်တို့ကိုအမဲသားအဖြစ်အသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ယောက်ျားတွေကိုမမှတ်မိရင်ငါတို့မှာခံစားချက်ရှိတယ်။ “ လဲသောအပင်မှထင်း” ကိုမလုပ်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်မိသားစုတစ်စုမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်သင်၎င်းအတွက်ငွေပေးမည်လားသို့မဟုတ်သင်၏သမီး၊ အစ်မများနှင့်ဆင်းရဲသောမိခင်များကိုပင်မမှတ်မိဘဲနေသလား။ ကြည့်ကြရအောင်၊ ဒီထိပ်ကိုငါ့အတွက်လက်သည်းပေါ်မှာကခုန်ကြရအောင်” ကြည့်ကြစို့။
Wilder diaz ဟုသူကပြောသည်
wilder diaz အားပြန်ကြားပါ
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်သီးခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူသွားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်မြတ်နိုးသော်လည်း ၄ လအကြာတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမခင်ပွန်းထံပြန်လာပြီး ၂ နှစ်နီးပါးချစ်မြတ်နိုးသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သင်ယူခဲ့သောအရာသည်အလွန်အကျွံနှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုရန်၊ သူမကယခုသူမကိုအခြားအရာတစ်ခုခုသို့မဖိအားပေးပါနှင့်သူမအားအရာရာတိုင်းကိုထောက်ပံ့ရန်မလုပ်ပါနှင့်။ သူမအကျင့်စာရိတ္တမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်။ သူမအားဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပြောပြသမျှကသူမကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ မင်းကိုငါကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ့်အချိန်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ကြိုးစားပါ .. အမှုကပြီးသွားပြီ။ သူကကောင်လေးကိုပိုပြီးဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ထားခဲ့တာ။ သူမယောက်ျားကအရမ်းကိုနာကျင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ဒီနေ့တောင်မှသူမဟာငါ့သူငယ်ချင်းပါ နောက်ပြီးသူမအိပ်ရာထဲမှာအတူနေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ fuck ဆိုတဲ့ကံကြမ္မာဟာငါ့ဘ ၀ ကိုပျော်ရွင်စေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကအခြားအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ ငါတို့ကသူငယ်ချင်းတွေ၊ အရာအားလုံးပါ။ ဒါပေမယ့်ဇန်န ၀ ါရီလကနေစပြီးဇွန်လအထိငါစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ ငါကသူနဲ့ဘက်ထရီတွေမထားတော့ဘူးဆိုတော့တစ်နေ့မှာသူမအလုပ်အကြောင်းဖုန်းဆက်လာပြီးသူမရဲ့ယောက်ျားကသူမနောက်ကားတစ်စီးဝယ်တော့မယ်လို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့မင်းကိုဒီကိုလာခေါ်ပါ၊ သူမကငါပဲသူမကိုဖိတ်သင့်တယ်လို့ပြောတယ်။ အမှုကသူမနဲ့နောက်တစ်နေ့စကားပြောပြီးသူမပျင်းတယ်လို့ပြောပြီးသူမကသူမလိုချင်ခဲ့လို့ငါမဖိတ်ခဲ့ဘူး ထွက်သွားပါ၊ ငါရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်ငါတို့သာသူမကိုသူငယ်ချင်းတွေသာရှိမယ်လို့ပြောပြီးသူမငါ့ကိုဆူပူကြိမ်းမောင်းလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သူ့ယောက်ျားမရှိရင်အခွင့်အလမ်းရှိမယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သူမနှင့်သူမ၏ကလေးငယ်များအားချီးမွမ်းခန်းများလှည့်ပေးခြင်း၊ သူမကြည့်ခြင်း၊ နှစ်ထပ်သဘောဖြင့်စကားပြောခြင်း၊ သူမကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သူမကိုရယ်ခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ကူညီခြင်း၊ ကူညီခြင်းအားဖြင့်သိသည်။ သူမခရီးထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် သူမသဘောပေါက်ပြီးပြီဆိုတာသူမခင်ပွန်းအတွက်အတားအဆီးတွေကိုအတင်းအဓမ္မထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူဟာသူမနဲ့သူမကလေးတွေကိုတာဝန်မယူတတ်သူ၊ သူမသူမကိုမကြာခဏငိုကြွေးမြည်တမ်းစေသည်။ တကယ်တော့အခုသူကိုယ်တိုင်နည်းနည်းလေးဝေးကွာသွားသောကြောင့်သူသည်ငါ့ကိုခေါ်ဖို့ခဲယဉ်းသည် (သို့) ငါနှင့်သူသည်ငါသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်အကြံပေးချက်ကိုအပိုင်းအစပြောပေမယ့်ငါသည်လည်းအနည်းငယ်ထပ်ခါတလဲလဲငါနည်းဗျူဟာပြုမိပါပြီ .. ကံမကောင်းငါသူ့ကိုအနမ်း x ကိုလေးစားမှုကိုမလှန်လှန်ကြဘူး, ငါသင်နှင့်သူမြင်ချင်သူကပြောသည် သူကငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပြောခဲ့တယ် .. ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူကအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ သူရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ke ကိုသဘောမတူဘူး။ တကယ်လို့သာမဟုတ်ရင် .. ဒီနေ့ငါစွဲနေပြီးငါစိတ် ၀ င်စားလျှင် xq အမှန်တရားကိုဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ငါအချို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုငါအချို့သောအကြံဥာဏ်ပေးသကဲ့သို့
ခင်ပွန်းသည်၌ရှိကြောင်း၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုမထိတွေ့ပါနှင့်၊ သင်သည်မည်သည့်အရာထက် ကျော်လွန်၍ အခန်းကဏ္ take မှပါ ၀ င်ခြင်း မှလွဲ၍ တစ်နေကုန်နှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုရန်သတိရပါ၊ ငါမနှစ်သက်သောချစ်သူ၊ ဆိုလိုသည်မှာခင်ပွန်းကိုမနာလိုခြင်းမဟုတ်ပါ ဤအရာသည်၎င်းတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့်၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုသည်သူတစ်ပါး၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရရှိနိုင်မှုကိုမမှတ်မိရန်အမြဲသတိရပါ။
လှပသောအမျိုးသမီးများသည်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ ယုံကြည်တယ်၊ သူတို့လိုချင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရနိုင်မလား။ မင်းဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့မထင်ဘူးလား၊ စိတ်ချယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။
မရေမတွက်နိုင်သောအမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်အိပ်ခဲ့ရသည်။ မော်ဒယ်လ်များ၊ အောင်မြင်သောစီးပွားရေးအမျိုးသမီးများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားအချို့ပင်။
ငါသာမန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါဟာမိန်းမတွေကိုပိုပြီးလှပပြီးပိုပြီးအောင်မြင်မှုရအောင်သွေးဆောင်နည်းကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲကလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုမင်းပြောပြပါရစေ၊ မိန်းမများနှင့်အတူအိပ်ချင်လျှင်သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဤနေရာတွင် download လုပ်ပါ။ http://tinyurl.com/lw49wrv
ငါ EDO MEX ဖြစ်သည့် ၃၃ နှစ်မှ ၃၇ နှစ်မှစ၍ ငါအသက် ၂၉ နှစ်မှစ၍ ငါသည် EDO MEX ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ INVERSORES7787@HOTMAIL.COM သတင်းစကားအချို့ကိုငါစောင့်၏
Alejandro ဖာနန်ဒက် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အကြံဥာဏ်ကောင်းကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာအချို့သောအဆင့်ရောက်နေပြီဆိုရင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကရှက်စရာရှက်စရာသဘာဝသဘာဝစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေ၊ အနီးကပ်ချဉ်းကပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးနောက်ဆုံးတွင်မက်ဆေ့ခ်ျ၏တုံ့ပြန်မှုကိုစိတ်ပျက်စေသည်။ မည်သည့်သဘောသဘာဝမဆို ... သူတို့ကတစ်ကိုယ်ရေနေသမျှကာလပတ်လုံးအိမ်ထောင်ပြုထားသောအမျိုးသမီးသည်သူမအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သူမမှအခြားဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အဆုံးသတ်၏ "ကံကြမ္မာသို့မဟုတ်ကံကြမ္မာ" ပါ ၀ င်ပါကလိမ်ပြောခြင်းသည်ကျန်းမာရေးမကောင်းပေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနာလိုတဲ့ခင်ပွန်းကလက်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်လို့ပါဘဲ။ hehehe၊ ဒါကဟာသပဲ၊ အဲဒါမမှန်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါဆိုရင်မင်းကမင်းနဲ့နီးချင်ရင်မိန်းမတစ်ယောက်တည်းပိုကောင်းတယ်လေ
ဤသည်အလွန်အပျိုကညာဖြစ်ပါသည်, နှင့်မှတ်ချက်များကိုပိုမို ...
ဒီဆောင်းပါးအမျိုးအစားဟာစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ် လက်ထပ်မိန်းမနှင့်ဘာကြောင့်ငရဲငါရှုပ်နေလိမ့်မည်နည်း ကျွန်တော့်ဇနီးကိုအခြားယောက်ျား၏ဇနီးအတွက်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ မင်းကိုမလုပ်ချင်တာကိုမလုပ်ပါနဲ့ ရိုးရှင်းပါတယ်
ကျွန်ုပ်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီး ၄၅ နှစ်အရွယ်လက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမကို fuck နှင့်ပို့ပေးလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သူမကိုမည်သို့ပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ။ သူမနေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရသည်။ ငါလုပ်ပေးကဲ့သို့သူမ၏
အရာအားလုံးကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ၊ သူတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော်တော်လေးပုံနေတယ်၊ ​​အမျိုးသမီးတွေဘာဖြစ်သွားသလဲ၊ ငါအာရုံစူးစိုက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့တယ်၊ ငါမပျော်မချင်းငါငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူး၊ ငါကောင်းကင်သို့သွားပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်မမြင်နိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွင်စွာဖြင့်ငရဲသို့ဆင်းသွားသည်။ နောက်တခါကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကိုမတွေ့မချင်းငြီးငွေ့လာပြီးစိတ် ၀ င်စားတော့မယ်။ ပြီးတော့ငါစိတ်ထဲရှိတဲ့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်အောင်နိုင်သူများဟုခေါ်ဝေါ်သောသတ္တိရှိသောသတ္တိများထဲမှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝစေရန်ပြုလုပ်ရန်ရဲဝံ့သည်။
လူအများစုထင်သကဲ့သို့နာကျင်သည်။ လက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တွင်အဆိုးရွားဆုံးသောအပြစ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကြီးမားသောအကျိုးဆက်များရှိသည်။ အခြားသူများအကြားဆက်ဆံရေးသည်လူတစ် ဦး ၏နာကျင်မှုမှတည်ဆောက်သည်၊ ၎င်းသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုဆွဲဆောင်သည်၊ မုန်းတီးမှုများနှင့်မိသားစုများတွင်အငြင်းပွားမှုများ၊ ကလေးများနှင့်မြေးများတွင်ရောဂါနှင့်ကျိန်စာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်သမ္မာကျမ်းစာကပြောထားသည်အတိုင်းအရွယ်ရောက်သူများအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးသောသေဆုံးမှုဖြစ်သည်။
လူတိုင်းကမင်္ဂလာပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကအဖြေပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုတိုက်တွန်းတယ်။ ကျွန်မယောက္ခမကိုချစ်တယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာအကြိမ်ပေါင်းများစွာအိပ်ချင်တယ်။ သူမ ၃၇ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်ကအသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီ။ သူမကအရာရာတိုင်းနီးပါးကိုသူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုပြောပြသည်။ သူမလွယ်ကူသော်လည်းငါ့ရည်းစားကသူပြောတာကိုပြောတာကသူမရှုပ်ထွေးတာကိုတွေ့ရခြင်းပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုချက်ချင်းဖြေပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
PS ငါသူမငါ့ကိုအများကြီးတွေ့မြင်သောကြောင့်ငါသူမငါ့ကိုဆွဲဆောင်သည်ဟုသံသယငါရှပ်အင်္ကျီအခါ, သူမကငါ့ကိုအလွန်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကူညီပေးပါကျေးဇူးပြု။ ကျေးဇူးပြု။ !!!!!
အမှန်တရားမှာဘုရားသခင်အားကျိန်ဆိုသောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုသေခြင်းသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်အသက်တာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မကွာမှီတိုင်အောင်ဘုရားသခင်အားကျိန်ဆိုစေသောအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအောင်နိုင်လိုသည်ဟုမှတ်ချက်ပေးသောဤအရူးအမူးများအားလုံးသည်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်တွင်ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပိုမိုရင့်ကျက်သည်ဟုယူမှတ်သည် မိသားစုတစ်ခုထူထောင်ပြီးသောမိသားစုတစ်စု၏မိသားစုကိုဖျက်ဆီးလိုသည့်စိတ်မရှိသောနှင့်မိုက်မဲသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများဖြင့်သူမနှင့်သူမချစ်ရသူများ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထောက်ခံသည့်တိုင်ဖြစ်သည်။
Lara luiz ဟုသူကပြောသည်
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကျွန်ုပ်သည်ဘရာဇီးမှလာရာလူးဝစ္စဖြစ်သည်။ သို့သော်ကယ်လီဖိုးနီးယား (အမေရိကန်) တွင်အခြေစိုက်သည်။
အမြဲတမ်းလိုချင်ခဲ့တယ် ကျွန်ုပ်၏ပုံစံကိုယနေ့ပုံစံသို့ပြောင်းလဲခဲ့သော DR.Zubia ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်တော် .... ချင်တယ်
သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါ၊ သူလည်းမင်းအတွက်သူလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမင်းကိုလည်းအသိပေးချင်ပါတယ်။ ထိုအခါငါရှိသည်
ငါဘဝမှာကြုံခဲ့ရသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ငါပထမ ဦး ဆုံးမြင်သောအခါငါသည်အထိအစစ်အမှန်ခဲ့ကြောင်းဘယ်တော့မှယုံကြည်ဘူး
သူ့ကိုဆက်သွယ်ပါ zubiazabiadum@yahoo.com ငါသည်လည်းတင်ပါးနှင့်ရင်ဘတ်ချဲ့ထွင်သည်ကိုငါသိ၏
Lara Luiz သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်၏ညီမ၏အိမ်ထောင်သည်သူငယ်ချင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏မျက်လုံးများကိုကြည့်ပြီးပြုံးသည်။ သို့မဟုတ်နှုတ်ဆက်ပါ၊ နှုတ်ဆက်မည်ဆိုလျှင်သူမမဟုတ်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုထိမိသည်။ အခြားရဲ့လက်မောင်း တစ်ခုခုရှိကောင်းရှိနိုင်မလား၊ ငါဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုတာငါသိတယ်
ကျွန်ုပ်သည်အဒေါ်နှင့်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်ရဲရဲရဲသောပြုမူဆက်ဆံမှုကိုပြသသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမသမီး၏နှစ်ဆဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူမမက်ဆေ့ခ်ျပို့လိုက်သည်။ ငါအထီးကျန်နေချိန်မှာသတင်းစကား
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကသူပြောသည့်အခါဘာကိုဆိုလိုသနည်း။